ဗေဒါလမ်း နှင့် ငယ်နိုင်လမ်း ~ Nge Naing
ဗေဒါလမ်း နှင့် ငယ်နိုင်လမ်း
Thursday, July 14, 2011 Nge Naing 83 comments
အဆိုနှင့် သရုပ်ဆောင် ကြည်ကြည်ဌေး၊ အက မေသန်းနု
(ဆရာကြီးဇော်ဂျီ ရဲ့ "ဗေဒါလမ်း" ကဗျာကို မှီးပြီး စပ်ထားတဲ့ ကဗျာလေးပါ၊ စစ်နိုင်)
ကျွန်မရဲ့ မွေးနေ့ဆုတောင်းအတွက် ကျေးဇူးတင်လွှာ ဆိုတဲ့ပို့စ်မှာ စာဖတ်သူကိုစစ်နိုင်က ကျွန်မအတွက် မွေးနေ့လက်ဆောင်အဖြစ် စပ်ဆိုထားတဲ့ ကဗျာလေးနဲ့ Hit Counter လေးသိန်းပြည့်တဲ့ အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် မှတ်တမ်းတင်လိုက်ပါတယ်။ သူဘာကြောင့် ဒီကဗျာကို စပ်လဲဆိုတာ ရေးထားတာကိုတော့ မွေးနေ့ဆုတောင်းပို့စ်ကမှတ်ချက်မှာ ရေးထားပါတယ်။
မိမိအတွက် ဆုတောင်းပေးထားတာကိုပဲ ထည့်ပြီး ဆန့်ကျင်ဘက်သဘောတရားတွေကို မထည့်ရင် ကျွန်မက လောကဓံတရားရဲ့ ဆန့်ကျင်ဘက် သဘောတရားကို လစ်လျူရှုရာ ရောက်သွားလိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့်မို့ မှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့ မွေးနေ့ဆုတောင်း ၁၂၆ ဦးဆီက မဟုတ်ဘဲ လာနှောင့်ယှက် စော်ကားနေတဲ့ အုတ်ကြားမြက်ပေါက်တွေဆီက အဲဒီပို့စ်မှာ ဆုတောင်းမဟုတ်တဲ့ မှတ်ချက်တွေကိုလည်း ဗေဒါလမ်းနဲ့ ငယ်နိုင်လမ်းကို ပိုပြီးပေါ်လွင်သွားအောင် အောက်မှာ ထည့်ပေးလိုက်ပါတယ်။
Hit Counter နှစ်သိန်းပြည့်တုန်းကလည်း ပန်းပန်လျှက်ပဲ ပို့စ်ကို နီနီဝင်းရွှေ ဆိုထားတာကို တင်ခဲ့ပို့စ်က ဒီနေရာမှာ ရှိပါတယ်။
ကျွန်မ ဘလော့ဂ်ကို လာအားပေးသူ သူအားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
လောကဓံကို ကြံ့ကြံ့ခံ ရင်ဆိုင်လျက်
Posted in: ကဗျာ,ဗွီဒီယို,သီချင်း,အထွေထွေ
July 14, 2011 at 11:35 PM Reply
July 14, 2011 at 11:41 PM Reply
မငယ်နိုင်ရဲ့ "မွေးနေ့ဆုတောင်းများအတွက် ကျေးဇူးတင်လွှာ"
( http://nge-naing.blogspot.com/2011/06/blog-post_16.html )
ပို့စ် အောက်က ကွန်မန့်တွေထဲမှာ ကိုစစ်နိုင်က မငယ်နိုင် ကို ဂုဏ်ပြုပြီး စပ်ဆိုထားတဲ့ "ပန်းပန်လျက်ပဲ" သို့မဟုတ် "ငယ်နိုင်လမ်း" ကဗျာစာမူက မူကွဲ ၂ ခု ဖြစ်နေလို့ မူကွဲ ၂ ခုလုံးကို အောက်မှာ တင်ပေးပါမယ်..
July 14, 2011 at 11:42 PM Reply
ဒါကြီးကိုဖတ်ပြီးကျွန်တော်တို.က ဘာလုပ်ရမှာလဲ မငယ်နိုင်.. ဘယ်လိုကြီးမားတဲ. ရည်ရွယ်ချက်နဲ.တင်တာလဲတော.မသိဘူး.. ကုန်သွားတဲ.အချိန်တွေအတွက်တော. နှမျောတယ်..
"ငယ်နိုင်လမ်း" ကဗျာစာမူ (၁) says:
July 14, 2011 at 11:45 PM Reply
http://myanmarastronomy.blogspot.com/ ရဲ့ စီဘောက်စ်မှာ မငယ်နိုင် ဘာလို. မနေနိုင် မထိုင်နိုင် သွားရေးရတာတုန်း
"ငယ်နိုင်လမ်း" ကဗျာစာမူ (၂) says:
July 14, 2011 at 11:49 PM Reply
သြော် ဒီမိုကရေစီဘက်တော်သားများက အသက်ကြီးလေ ကလေးကလားဆန်လေပါလား
ဘာမဟုတ်တာလေးနဲ.အနိုင်ရဖို.အတွက် ဆရာကြီးဇော်ဂျီရဲ. ကဗျာတောင် ဖျက်ဖို.ဝန်မလေးပဲကိုး
အန်တီ.ရဲ.ဘလော.ကို မကြာမကြာရောက်ဖြစ်ပြီး တချို.ပိုစ်.လေးတွေကို သဘောကျမိပါတယ်၊ တောတွင်းတုန်းက အန်တီ.ရဲ.အတွေ.အကြုံတွေကို ရေးထားတာတွေကိုတော. အနှစ်သက်ဆုံးပါ၊ နောက်ပိုင်း အော်ဇီက အတွေ.အကြုံတွေနဲ. သူနာပြုတစ်ယောက်ရဲ. အတွေ.အကြုံတွေကိုလည်း အမြဲဖတ်ဖြစ်ပါတယ်. အန်တီ.အနေနဲ. ရေးစရာမရှိလို. နေ.စဉ်ဖြစ်ပျက်သမျှတွေ ရေးနေရင်တောင်မှ ဖတ်တဲ.သူတွေအတွက် အနည်းအကျဉ်းတော. အကျိုးရှိမှာပါ. ဒီပိုစ်.ကို ဖတ်ပြီးသွားချိန်မှာတော. အရမ်း ကို စိတ်ပျက်မိပါတယ်. လေးစားခဲ.မိတာတွေအားလုံး ကြက်ပျောက်ငှက်ပျောက် ပျောက်ကုန်ပါပြီ. အန်တီ.ကို ဆက်ပြီးလေးစားချင်ပါတယ်. ဒီထက် တန်ဖိုးရှိတဲ.ပိုစ်.တွေ ရေးတတ်မယ်လို.လည်း ယုံကြည်ပါတယ်. ရင်းနီးနေသူတစ်ယောက်ဖြစ်လို. Anonymous နဲ.ပဲရေးလိုက်ပါတယ်. အန်တီ.ကိုလေးစားနေတဲ. လူငယ်တစ်ယောက် လျှော.သွားတယ်လို.ပဲ သိထားလိုက်ပါ.
ဒါမျိုးပိုစ်.တွေတင်မယ်ဆိုရင် နိုင်ငံရေးပိုစ်.တွေ မတင်ပါနဲ.။ ဒီမိုကရေစီဘက်တော်သားတွေအားလုံးကို သိမ်းကြုံးအပြောခံရလို.ပါ။ ကျေးဇူး။
July 15, 2011 at 12:11 AM Reply
http://myanmarastronomy.blogspot.com/ ရဲ့ စီဘောက်စ်မှာ မငယ်နိုင် ဘာလို. မနေနိုင် မထိုင်နိုင် သွားရေးရတာတုန်း))))
အဲဒီ Anonymous က ဒေါ်လာစားကိုယ်တိုင် မဟုတ်လို့ တမင်ရေးတာ မဟုတ်ရင်တော့ တော်တော်တုံးတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်လို့ သတ်မှတ်လို့ရတယ်။ အဲဒီပို့စ်ကို ကိုကိုးအိမ်ဘလော့ဂ်မှာ တွေ့လို့ ပြန်ဖေါ်ပြတာ ကိုကိုးအိမ်ဘလော့ဂ်ကို ညွန်းပေးရင် လုံလောက်လျက်နဲ့ ကျွန်မက စေတနာပိုပြီး မူရင်းတင်တဲ့သူတွေကိုလည်း လူသိပါစေဆိုပြီး အသိအမှတ်ပြုပေးခဲ့တာကို မဆိုင်တဲ့ ဒေါ်လာစားက ကြားကနေပြီး အပေါ်မှာ ကျွန်မနာမည်နဲ့ ပေါက်ကရ သွားရေးထားတာကို သူ့မှတ်ချက်ကို ဖတ်ပြီး သဘောမပေါက်တာ အံ့သြပါတယ်။ ဘလော့ဂ်ပိုင်ရှင်ကလည်း ကျွန်မ ပြန်ဖေါ်ပြလို့ ကျေးဇူးတင်တယ်လို့ ရေးထားတဲ့ IP နဲ့ဒေါ်လာစားနဲ့ အပေါင်းအပါ mg က Nge Naing နာမည်နဲ့ ပေါက်ကရရေးထားတဲ့ IP မတူဘူးဆိုတာ သိလျက်နဲ့ မဖျက်ဘူး။
MLboy -ရည်ရွယ်ချက်က ဒါကို အသိပေးခြင်းနဲ့ ကျွန်မအတွက် စပ်ဆိုထားတဲ့ ကဗျာကို အသိအမှတ်ပြု ဂုဏ်ပြုခြင်းပဲ။ ကျွန်မ ဘလော့ဂ်က ကျွန်မ ဘ၀နဲ့ ခံစားမှုတွေကို မှတ်တမ်းတင်တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဘလော့ဂ်မျှသာ ဖြစ်လို့ လာဖတ်သမျှ စာဖတ်သူအားလုံးအတွက်တော့ ကျွန်မပို့စ် တခုစီက အံ့ဝင်ခွင်ကျ မဖြစ်နိုင်တာ စိတ်မကောင်းပါ။
အိုပါး ရေ အဲဒါ ဖျက်တာ မဟုတ်ဘူး ပွားတာ။ ကဗျာရှင်က ဆရာဇော်ဂျီရေးတဲ့ ကဗျာကို မှီပြီး စပ်ပါတယ်လို့ အတိအကျ ညွန်းထားပေးပါတယ်။
လူပြောများနေတဲ. မိုးသွေးငယ်နဲ. မငယ်နိုင် ကိစ္စလေး ရှင်းပေးပါအုံး
July 15, 2011 at 12:22 AM Reply
ကွန်ဂရက် ကျူလေးရှင်း mg, Anonymous , ဒေါ်လာစား နဲ. မော်ဆရာ၊
ခင်များတို.ကွန်းမန်.တွေကို ပိုစ်.အဖြစ်ပြန်တွေ.ရတာ ဂုဏ်ယူပါတယ်
အပေါ်မှာ အန်တီငယ်ကို ထိုက်ခိုက်တဲ့ မှတ်ချက် ၈ ခုကို လူတယောက်ထဲက ရေးသွားတာပါ
မောင် (July 14, 2011 11:35 PM)
MLBoy (July 14, 2011 11:42 PM)
Anonymous (July 14, 2011 11:45 PM)
အိုပါး (ခေတ္တကိုရီးယား) (July 14, 2011 11:49 PM)
Anonymous (July 14, 2011 11:58 PM)
BS (July 15, 2011 12:10 AM)
Anonymous (July 15, 2011 12:16 AM)
Anonymous (July 15, 2011 12:22 AM)
ဆိုတဲ့ နာမည်တွေနဲ့ အန်တီငယ်ကို တိုက်ခိုက်သွားသူဟာ အန်တီငယ်ကို နာမည်မျိုးစုံသုံးပြီး အမြဲ လာနှောင့်ယှက်နေတဲ့ ရုရှက စစ်သား mg ပါ
July 15, 2011 at 12:57 AM Reply
အိုပါး၊ Anonynous (July 14, 2011 11:58 PM), BS, Anonynous (July 15, 2011 12:16 AM) နဲ့ Anonymous (July 15, 2011 12:22 AM) အောက်ကမြစ် ရေးမတတ်တဲ့ တယေက်တည်းနဲ့ နာမည်အမျိုးမျိုး သုံးပြီး မှတ်ချက်တွေ ဒီလောက်တောင် ရေးသွားတာ ကျွန်မ ဘလော့ဂ်အတွက် အကုသိုလ် ဒီလောက်တောင် လာယူနေတာ စိတ်မကောင်းပါဘူး။ ဒီနေ့ ၀ါဆိုလပြည့်နေ့ ဓမ္မစင်္ကြာနေ့ကို ရောက်နေပြီ။ မြတ်စွာဘုရား ပထမဦးဆုံး ဟောကြားတဲ့ သစ္စာလေးပါး တရားကို နှလုံးသွင်းပြီး သာဓုခေါ်ပြီး ကုသိုလ်ယူကြပါ။ အောက်ကမြစ်ရေးမတတ်တာကို အရင်ပို့စ်တခုမှာ ရေးပေးဖူးပါတယ်။ အခုတော့ မအားတော့ဘူး ဓမ္မာစင်္ကြာနေ့လွန်မှ ကျွန်မ ပြန်ရေးပေးမယ်။
ဟုတ်ပါတယ် သားထူး ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ အန်တီလည်း အခုပဲ အောက်ကမြစ်တွေကို ကြည့်ပြီး သိလိုက်တယ်။ ဒါပေမဲ့ အခု ၀ါတွင်းကို ရောက်နေပြီ သူတို့ပေးတဲ့ အကုသိုလ်ကို မယူပါနဲ့။ ဒီနေ့ ဓမ္မစင်္ကြာနေ့ မြတ်စွာဘုရားက ပဉ္စ၀ဂ္ဂီငါးဦးကို ဓမ္မစင်္ကြာတရားဦးကို ဟောတော်မူတဲ့နေ့ အကုသိုလ် မယူကြပါနဲ့တော့။
"ငယ်နိုင်လမ်း" ကဗျာ အပေါ် စာဖတ်သူများ၏ comment (၁) says:
July 15, 2011 at 3:22 AM Reply
"ငယ်နိုင်လမ်း" ကဗျာ အပေါ် စာဖတ်သူများ၏ comment (၁)
(June 17, 2011 10:07 PM)
သို့မဟုတ် "ငယ်နိုင်လမ်း" ကဗျာ စပ်ဆိုပြီး ၇ဲဘော်မငယ်နိုင်ကို ဂုဏ်ပြုပေးတာလဲ နှစ်ထောင်းအား၇ ဖြစ်မိပါတယ်.. ၇ဲဘော်မငယ်နိုင် လို ချီးကျူးထိုက်၊ ဂုဏ်ပြုထိုက်တဲ့ လူကို ချီးကျူး ဂုဏ်ပြုတာ မင်္ဂလာတပါးပေပဲ..
(၇ဲဘော်ဘခက် ရဲ့ မူရင်း comment ကို "မွေးနေ့ဆုတောင်းများအတွက် ကျေးဇူးတင်လွှာ" post အောက်က Comments နေရာမှာ ဖတ်နိုင်ပါတယ်။
မူရင်း comment ကို တိုက်ရိုက် ဖတ်ချင်ရင် "ငယ်နိုင်လမ်း" ကဗျာ အပေါ် စာဖတ်သူများ၏ comment (၁)" ခေါင်းစဉ်ကို နှိပ်ပါ။)
"ငယ်နိုင်လမ်း" ကဗျာ အပေါ် စာဖတ်သူများ၏ comment (၂) says:
July 15, 2011 at 3:24 AM Reply
"ငယ်နိုင်လမ်း" ကဗျာ အပေါ် စာဖတ်သူများ၏ comment (၂)
(June 19, 2011 8:04 PM)
အဖျက်သမားစာ၇င်းထဲက mg ၊ zaw ၊ hanzaw ၊ ဦးသူတော်၊ တုတ်ကြီး၊ ...... နာမည်တွေနဲ့မေ၇းဘဲ Anonymous နဲ့ လာေ၇းတာလားကွ
(စစ်ခွေးမုန်းသူ ရဲ့ မူရင်း comment ကို "မွေးနေ့ဆုတောင်းများအတွက် ကျေးဇူးတင်လွှာ" post အောက်က Comments နေရာမှာ ဖတ်နိုင်ပါတယ်။
မူရင်း comment ကို တိုက်ရိုက် ဖတ်ချင်ရင် "ငယ်နိုင်လမ်း" ကဗျာ အပေါ် စာဖတ်သူများ၏ comment (၂)" ခေါင်းစဉ်ကို နှိပ်ပါ။)
"ငယ်နိုင်လမ်း" ကဗျာ အပေါ် စာဖတ်သူများ၏ မှတ်ချက် (၃) says:
July 15, 2011 at 3:25 AM Reply
"ငယ်နိုင်လမ်း" ကဗျာ အပေါ် စာဖတ်သူများ၏ မှတ်ချက် (၃)
(June 19, 2011 8:28 PM)
မူရင်း comment ကို တိုက်ရိုက် ဖတ်ချင်ရင် "ငယ်နိုင်လမ်း" ကဗျာ အပေါ် စာဖတ်သူများ၏ comment (၃)" ခေါင်းစဉ်ကို နှိပ်ပါ။)
"ငယ်နိုင်လမ်း" ကဗျာ အပေါ် စာဖတ်သူများ၏ comment (၃) says:
July 15, 2011 at 3:30 AM Reply
"ငယ်နိုင်လမ်း" ကဗျာ အပေါ် စာဖတ်သူများ၏ comment (၃)
"ငယ်နိုင်လမ်း" ကဗျာ အပေါ် စာဖတ်သူများ၏ comment (၄) says:
July 15, 2011 at 3:35 AM Reply
"ငယ်နိုင်လမ်း" ကဗျာ အပေါ် စာဖတ်သူများ၏ comment (၄)
(June 21, 2011 7:12 PM)
(( mg ၊ zaw ၊ hanzaw ၊ ဦးသူတော်၊ မှော်ဆရာ၊ တုတ်ကြီး၊ ငယ်နိုင်.ယောက်ျား၊ SV ယောက်ျား၊ ...... )) ဆိုတဲ့ နာမည်တွေ အပါအဝင် နာမည်မျိုးစုံ သုံးပြီး ဒီမိုကရေစီထောက်ခံသူ ဘလော့ရှင် မငယ်နိုင် နဲ့ ပြည်သူတွေကို နှောင့်ယှက်ပုတ်ခတ်စော်ကားဆဲဆိုနေတဲ့ စစ်အုပ်စုရဲ့ လက်ပါးစေ mg က ((ဒီမို ကျော်ကျော်)) ဆိုပြီး ((ဒီမိုကရေစီ)) ဆိုတဲ့ နာမည်ကို အလွဲသုံးစားလုပ်ပြီး ပုံမှားရိုက်ပြီး ရေးသွားပါလား..
July 15, 2011 at 3:37 AM Reply
အသက် ၄၀ ကျော် မငယ်နိုင်တစ်ယောက်လည်း ဒီလိုနေ့ကြီးမှာတောင် ဒီလိုပိုစ့်ရေးပြီး တင်နိုင်တယ်နော်
July 15, 2011 at 3:58 AM Reply
မရေးတော.ဘူးလို.နေပေမယ်. အမြင်မတော်ဘူးထင်လို. တစ်ခုလောက်သတိပေးပါရစေ.. မငယ်နိုင်တင်ထားတဲ.ပိုစ်.အတွက် မငယ်နိုင်မှာပဲတာဝန်ရှိပါတယ်.. ပိုစ်.ထဲမှာပါတဲ. နာမည်ပိုင်ရှင်တစ်ယောက်ယောက်က ပြဿနာလာရှာလို.ရပါတယ်.. သတင်း က လွဲပြီး သူများနာမည်တစ်ခုကို ပိုစ်.တင်ဖော်ပြမယ်ဆိုရင်အသိမပေးပဲဖော်ပြလို.မရပါဘူး။ပို.စ်ကို ဖြစ်ကရက်ဆန်း တင်ဖြစ်လို. အဲလိုပြဿနာအရှာခံရတိုင်း မငယ်နိုင်ပဲ ပိုစ်.ကို ပြန်ပြန်ပြင်နေခဲ.ရတာကို ”ဖတ်စေချင်သည်” နဲ. ”ကမ္ဘာပျက် မပျက်” ပိုစ်.တွေက သက်သေပြနေပါတယ်. နောက်ဆုံးကျရင် မငယ်နိုင်ချည်းပဲ ပတ်ခံနေရလို. အကြံပေးတာပါ
July 15, 2011 at 4:29 AM Reply
ဒီလိုနေ့မျိုးမှာတောင် သွေးဆုံးငယ်နိုင်တစ်ယောက် အကုသိုလ်တွေ ပွားနေတာကိုး
တခြားလူတွေနဲ့ဆိုင်တာတွေတော့မသိဘူးဗျာ ကျွန်တော်နဲ့ဆိုင်တာပြောရရင်တော့ ကျွန်တော်ရေးတဲ့ကွန်းမန့်တွေက မငယ်နိုင်အတွက် အနာပေါ် ဒုတ်ကျသလိုဖြစ်တာကြောင့် မငယ်နိုင်ချက်ချင်းဖျက်တတ်တဲ့အကြောင်း ပိုစ့်ထဲမှာပါလို့ အားလုံးသိသွားတယ်၊ ကျွန်တော့ဘလော့ကို မငယ်နိုင်အမြဲလာဖတ်ကြောင်း ပိုစ့်ထဲမှာ ရေးထားတယ် (ဖတ်ပြီးရီတာလား ငိုတာလားတော့မသိဘူး)၊ ဒီလောက်ဆို ကျေနပ်ပြီဗျို့.. ဒါနဲ့ Anonymous နဲ့ဆဲသမျှ အကုန်လုံးကို ကျွန်တော်ဆဲတာ၊ ကျော်နိုင်နာမည်၊ တိုးနန္ဒနာမည်နဲ့ ရေးသမျှကို ကျွန်တော်ရေးတာလို့တော့ မပြောနဲ့.. ကျွန်တော်က မငယ်နိုင်ရဲ့အကြောင်းကို တောထဲကနေ အော်ဇီရောက်ချိန်ထိ အစအဆုံးသိသူပါ။ မငယ်နိုင် ခုလို ကယောင်ကတမ်းနဲ တွေ့သမျှလူအားလုံးကို ကိုယ့်စိတ်ထဲစိုးမိုးနေတဲ့လူတစ်ယောက်ကိုပဲ ထင်နေတတ်တဲ့အကျင့်ရှိမှန်းလည်း သိတယ်။ ဒါပေမယ့် ကံကောင်းတာတစ်ခုက အရင်လူလို မငယ်နိုင်ရဲ့ အထောက်အထားမရှိပဲ ကိုယ်ထင်တာကိုယ်ပြောနေတာတွေနဲ့ သွေးရူးသွေးတမ်းစွပ်စွဲနေတာတွေကို စိတ်ပျက်လက်ပျက်ဖြစ်ပြီး မငယ်နိုင်ရဲ့ အကြောင်းမရှိအကြောင်းရှာ နောက်ကနေလိုက်ပြီး အမျိုးမျိုးပတ်သက်ဖို့ကြိုးစားနေတာကို အီးတောင်လှည့်မပေါက်ရလောက်တဲ့အထိတော့ ကျွန်တော်က မရက်စက်တတ်ပါဘူးဗျာ.. မရက်စက်ပေမယ့် ကျွန်တော်မဆဲပဲ ကျွန်တော်ဆဲတယ်လို့အပြောခံထားရတော့ မကောင်းဘူးလေ အပြောခံပြီးမှတော့ ဆဲရတော့မှာပေါ့။ မငယ်နိုင်ကို ဘလော့အတုလုပ်တာကိုလည်း ကျွန်တော်တို့အုပ်စုပဲလို့စွပ်စွဲပြန်တယ် သူများဘလော့အတုလုပ်ဖို့နေနေသာသာမငယ်နိုင်ရယ် ဒီဘလော့တစ်ခုတောင် သူများလုပ်ပေးထားတာဗျ။ ကျွန်တော်လည်း မငယ်နိုင်လိုပဲ တော်ထဲက လာတာပဲ၊ ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့မှာ မိန်းခလေး ၂ ယောက်တောင်ပါပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အတုလုပ်တယ်အပြောခံထားရပြီးမှတော့ ကြိုးစားပြီး မထူးဇတ်ခင်းရအုံးမယ်ဗျို့။ နာမည်မသုံးပဲ သုံးတယ်အပြောခံရတော့ အပြောခံရတာနဲ့တန်အောင် ဆက်သုံးရမှာပဲဗျာ။ ကျော်နိုင်နဲ့ တိုးနန္ဒတို့နှစ်ယောက် ကိုလည်း အားနာပါတယ်ဗျာ။ အပြစ်မရှိပေမယ့် မငယ်နိုင်ရဲ့ ထင်တာတစ်ခုကြောင့် စွပ်စွဲမိတာနဲ့ နောက်ဆိုအခြေနေ ပိုဆိုးတော့မှာပဲ။ တခြားသင်ခန်းစာလေးတွေ မရရင်တောင် စိတ်ထဲစိုးမိုးနေတဲ့လူကို ထင်သလိုစွပ်စွဲနေတဲ့အကျင့်လေးတော့ ဖျောက်သင့်ပြီ
ဗျိဲု့.. အဲဒီစွပ်စွဲမှုကြောင့်ရလာတဲ့နောက်ဆက်တွဲတွေက ပေးဆပ်ရတာတွေများတယ်ဆိုတာ မငယ်နိုင် သိပြီးသားပါနော
July 15, 2011 at 4:34 AM Reply
မငယ်နိုင်ဘဝကလည်း လှည်းဘီးမှာ ကပ်နေတဲ.ချီးလိုပါပဲလား.. ဒီလိုပိုစ်.မျိုးကို ဒီလိုနေ.မျိုးမှာတင်နိုင်တာကိုတော. အံ.သြောချီးကျူးတယ်ဗျာ
မငယ်နိုင်တစ်ယောက် လူတကာရွံရှာစက်စုတ်နေတဲ.ဘဝက မြန်မြန်လွတ်ပါစေဗျားးးး
July 15, 2011 at 8:04 AM Reply
မငယ်နိုင်ထက် အသက်တစ်ဝက်ငယ်တဲ. လူငယ်တွေက မငယ်နိုင်ထက် ပိုပြီးလေးစားအတုယူဖို.ကောင်းတယ်ဗျာhttp://groups.google.com အဲဒီမှာသာကြည်.တော.
July 15, 2011 at 10:33 AM Reply
ကဗျာမှာရေးထားတဲ့ အတိုင်းပါပဲလား။၀င်လာတဲ့ ကွန်မန့် တွေနဲ့ ကဗျာက ပိုပြီးအသက်ဝင်သွားတာပေါ့ ။ တိုက်ခိုက်ဖို့ ဘေးတီးဖို့ဘယ်တုန်းကတည်းကစောင့် နေလဲမသိဘူး။ ကျနော်ကတော့ဘာရယ်မဟုတ်ပါဘူး အစ်မရဲ့အမာခံပရိတ်သတ် ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်း ၀င်ရေးတာပါ :)
July 15, 2011 at 10:36 AM Reply
ရုရှားက စစ်ဗိုလ်တွေက -
(၁) မောင် ... (၂) MLBoy ... (၃) Anonymous (July 14, 2011 11:45 PM) ... (၄) အိုပါး (ခေတ္တကိုရီးယား) ... (၅) Anonymous (July 14, 2011 11:58 PM) ... (၆) BS ... (၇) Anonymous (July 15, 2011 12:16 AM) ... (၈) Anonymous (July 15, 2011 12:22 AM) ... (၉) ဦးသူတော် ... (၁ဝ) ငယ်ကိုင် ... (၁၁) မိုးသောက်ကြယ် ... (၁၂) Anonymous (July 15, 2011 3:58 AM) ... (၁၃) ဒေါ်လာစား ... (၁၄) mg ... (၁၅) Anonymous (ကျပ်ပြေးတုတ်ကြီး) (July 15, 2011 4:37 AM) ... (၁၆) ငယ်နိုင်.ယောက်ျား ... (၁၇) ဒေါက်တာလှိုင်မြင့် ... (၁၈) Anonymous (July 15, 2011 8:04 AM)
ဆိုတဲ့ နာမည်တွေကို သုံးပြီး ပက်ပက်စက်စက် ဆဲတာတွေ၊ မိုက်မိုက်ရိုင်းရိုင်း ပုတ်ခတ်တာတွေ၊ မမှန်သတင်း ရေးတာတွေ၊ အရေမရအဖတ်မရ ပေါတောတော ပေါက်ကရ ရေးတာတွေ လုပ်ပြီး သူတို့အမေ အရွယ်၊ အဒေါ် အရွယ်လောက် ရှိတဲ့ မငယ်နိုင်ကို ဝိုင်းတိုက်နေလိုက်တာ ပြောမယုံ ကြုံဘူးမှသိရတော့တယ် ...
July 15, 2011 at 10:50 AM Reply
((( ရေးရလဲ မသက်သာ
Comment မှာ ရိုင်းသဗျ၊ ပိတ်လိုက်ပြန်ရ။ )))
ဆိုတဲ့ ကဗျာစာသားလေးကလဲ မှန်လိုက်တာဗျာ ...
မှန်တာကို သက်သေပြနေတာက (( ဗေဒါလမ်း နှင့် ငယ်နိုင်လမ်း )) Post အောက်က Comments တွေထဲက "ဒေါ်လာစား" ၊ "အိုပါး" ၊ "တုတ်ကြီး" ၊ "mg" ၊ "ဦးသူတော်" ဆိုတဲ့ comment ပေးသူတွေရဲ့ နာမည်တွေပါဘဲ ...
ရုရှားက စစ်ဗိုလ်တွေဟာ တပ်မတော်ကို ကိုယ်စားပြုနေတာ ဖြစ်လို့  ငါးခုံးမတကောင်ကြောင့် တလှေလုံး မပုပ်စေသင့်ဘူး ...
ပြီးတော့ ရုရှားက စစ်ဗိုလ်တွေဟာ နိုင်ငံတော်ကို ကိုယ်စားပြုနေတဲ့ ပညာတော်သင်တွေ ဖြစ်တယ် ...
နိုင်ငံတော်ကို ကိုယ်စားပြုနေတဲ့ ပညာတော်သင်တွေ ဖြစ်လျက်နဲ့ လူ့ ကျင့်ဝတ်ကို မလိုက်နာဘဲ သူတို့အမေ အရွယ်၊ အဒေါ် အရွယ်လောက် ရှိတဲ့ အမျိုးသမီးတယောက်ကို ပက်ပက်စက်စက် ဆဲတာတွေ၊ မိုက်မိုက်ရိုင်းရိုင်း ပုတ်ခတ်တာတွေ၊ မမှန်သတင်း ရေးတာတွေ၊ အရေမရအဖတ်မရ ပေါတောတော ပေါက်ကရ ရေးတာတွေ လုပ်ပြီး ဝိုင်းတိုက်နေတာက အင်မတန် ရှက်စရာကောင်းပါတယ် ...
July 15, 2011 at 11:50 AM Reply
ငယ်နိုင်လမ်း ကဗျာကိုဖတ်ပီး ကဗျာမှာရေးထားတဲ့အတိုင်းဖြစ်နေပါလား လို့ ကော်မင့်ပေးမလို့ဝင်လိုက်တာ ကျနော်ေ၇းချင်တာတွေကို (အလင်းတန်း) နဲ့ (စစ်ဗိုလ်များ လူ့ ကျင့်ဝတ်ကို လိုက်နာစေလိုသူ) ဆိုတဲ့ ပြည်သူ့ ဘက်သား ကော်မင့်ပေးသူတွေကေ၇းထားပီးသားဖြစ်နေတယ်။ (အလင်းတန်း) နဲ့ (စစ်ဗိုလ်များ လူ့ ကျင့်ဝတ်ကို လိုက်နာစေလိုသူ)ေ၇ ... အမှန်အတိုင်းမြင်ပီး အမှန်အတိုင်း ကော်မင့်ပေးသွားတာကို ကျေးဇူးပါ။ ကဗျာထဲမှာထည့်စပ်ထားတာက အစ်မငယ်နိုင်ကြုံနေ၇တဲ့အဖြစ်မှန်တွေပဲဆိုတာကို ကဗျာထဲမှာပါတဲ့ ၇ု၇ှားကစစ်သားတွေကိုယ်တိုင်လာပီး သက်သေခံပေးသွားတယ်။
July 15, 2011 at 12:03 PM Reply
(တုတ်ကြီး) နဲ့ (ငယ်နိုင်.ယောက်ျား) က အစ်မငယ်နိုင်ကို ပျစ်ပျစ်နှစ်နှစ်ဆဲထားတာတွေကိုဖျက်လိုက်တော့မှ အပုပ်နံ့ နည်းနည်းသက်သာသွားတာ၊ အစ်မငယ်နိုင်ရေ။ ဒါတောင် (ဒေါ်လာစား) နဲ့ (mg)ေ၇းထားတဲ့ကော်မင့်တွေက အပုပ်နံ့တထောင်းထောင်းထွက်နေသေးတယ်။
"ငယ်နိုင်လမ်း ကဗျာဟာ ဆရာဇော်ဂျီရဲ့ ဗေဒါလမ်း ကဗျာကို ဖျက်တာ" လို့ ပြောနေသူများ ဖတ်ရန် မှတ်ချက် says:
July 15, 2011 at 1:01 PM Reply
"ငယ်နိုင်လမ်း ကဗျာဟာ ဆရာဇော်ဂျီရဲ့ ဗေဒါလမ်း ကဗျာကို ဖျက်တာ" လို့ ပြောနေသူများ ဖတ်ရန် မှတ်ချက်
(June 23, 2011 1:18 PM)
ကိုစစ်နိုင်ရဲ့ ကဗျာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဆရာဇော်ဂျီရဲ့ ကဗျာကို ဖျက်တယ်လို့ ပြောနေတဲ့သူတွေကို ပြောလိုတာက အဲဒါ ဖျက်တာမဟုတ်ဘူး၊ ပွားတာသာ ဖြစ်တယ်။
မူရင်း အနုပညာတခုကို ဖျက်ဆီးလို့လည်း ဘယ်တော့မှ ပျောက်ပျက်သွားမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ သူစပ်ဆိုထားတဲ့ အောက်မှာ ဆရာဇော်ဂျီရဲ့ ကဗျာကို မှီပြီးစပ်ဆိုထားတယ်လို့ ရည်ညွန်းချက်ကို ရေးထားပြီးသား ဖြစ်တယ်။ Reference ပေးထားပြီးသား ဖြစ်လို့ ကိုစစ်နိုင်က ဆရာဇော်ဂျီကဗျာကို ခိုးတာလည်း မဟုတ်ဘူး၊ ဖျက်တာလည်း မဟုတ်ဘူး။
ဘာ Reference မှ မပေးဘဲ ဘုရားဟောတွေကိုလည်း ကိုယ်တိုင်ဝိပဿနာ ပွားလို့ရထားတဲ့ တရားလိုလို၊ တခြားစာအုပ်တွေထဲက သူများပြောထားတဲ့ အဆိုမိန့်တို့ အင်္ဂလိပ်စာတို့ကိုလည်း တိုက်ရိုက်ပုံတူ ကူးချပြီး ကိုယ်တိုင်ပဲ ရေးထားတဲ့စာလိုလို ဘာ Reference မှ မပေးဘဲ ဘလော့ဂ်မှာ တင်နေတဲ့သူတွေ ရှိပါတယ်။ အဲလိုမျိုးလူတွေမှ သူများစာကို ကိုယ့်စာလုပ်ပြီး ဖျက်ဆီးတာ ခိုးချတာ ဖြစ်တယ်။ အဲဒီလို အမျိုးအစားတွေ ထဲမှာ ကိုစစ်နိုင်စပ်ထားတဲ့ ကဗျာမပါဘူး။ ဒါကြောင့် လိပ်ပြာသန့်သန့်နဲ့ ကျွန်မ ပို့စ်တခု သီးသန့်အဖြစ် ပြန်တင်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ပါတယ်။
July 15, 2011 at 1:02 PM Reply
(July 15, 2011 12:11 AM)
ကိုစစ်နိုင်ရဲ့ ကဗျာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဆရာဇော်ဂျီရဲ့ ကဗျာကို ဖျက်တယ်လို့ ပြောနေတဲ့သူတွေကို ပြောလိုတာက အဲဒါ ဖျက်တာ မဟုတ်ဘူး ပွားတာ။ ကဗျာရှင်က ဆရာဇော်ဂျီရေးတဲ့ ကဗျာကို မှီပြီး စပ်ပါတယ်လို့ အတိအကျ ညွန်းထားပေးပါတယ်။
ငယ်နိုင်လမ်း ကဗျာဟာ ဆရာဇော်ဂျီရဲ့ ဗေဒါလမ်း ကဗျာကို ဖျက်တာ မဟုတ်ပါ says:
ငယ်နိုင်လမ်း ကဗျာဟာ ဆရာဇော်ဂျီရဲ့ ဗေဒါလမ်း ကဗျာကို ဖျက်တာ မဟုတ်ပါ
ငယ်နိုင်လမ်း ကဗျာအတွက် မှတ်ချက် says:
July 15, 2011 at 1:11 PM Reply
ငယ်နိုင်လမ်း ကဗျာအတွက် မှတ်ချက်
July 15, 2011 at 2:43 PM Reply
July 15, 2011 at 3:19 PM Reply
၀န်တို မစ္ဆရိယ သံတွေ များလှချည်လား..
July 15, 2011 at 9:17 PM Reply
July 15, 2011 at 11:04 PM Reply
July 16, 2011 at 5:04 AM Reply
ဒေါ်လာစားရဲ. ကိုယ်မလုပ်ပဲ စွပ်စွဲခံရခြင်းအတွက် တန်ပြန်သင်ခန်းစာပေးဖို. ရာဇသံကို အရမ်းသဘောကျတယ်ဗျာ.. ဒေါ်လာစားပြောသလိုပါပဲ မရေးပဲ ရေးတယ်၊ မဆဲပဲ ဆဲတယ် အပြောခံထားရတာကို ပြန်မရုတ်သိမ်း ပြန်မတောင်းပန်ရင်တော. အပြောခံရတဲ.အတိုင်း တကယ်လုပ်သင်.ပါတယ်.. မလုပ်ဘဲနဲ.အပြောခံရတာတော. တကယ်မကောင်းပါဘူးဗျာ.. အားပေးပါတယ်.. ဆက်လုပ်
July 16, 2011 at 8:23 PM Reply
July 16, 2011 at 11:38 PM Reply
ပေါက်ကရ လာရေးထားတဲ့ မှတ်ချက်တွေကို ဖျက်ရင်း သီဟပူရဘလော့ဂ်ရပ်ဝန်းသားရဲ့ မှတ်ချက်တခု ရောပါသွားတာ ဆောရီးပါ။ ကျွန်မ အခုလောလောဆယ် ဘယ်မှတ်ချက်ကိုမှ အကြောင်းပြန်လို့ အချိန်မရသေးဘပါဘူး။ ဘယ်သူ့အတွက်မှ အကျိုးမရှိတဲ့ ပေါက်ကရတွေကို အချိန်ကုန်ခံပြီး လာမရေးပါနဲ့။ ၀ါတွင်းကာလအချိန်တွေကို ကုသိုလ်နဲ့ ယှဉ်ပြီးကုန်လွန်နိုင်ကြပါစေ။
မာဝိဂစ္ဆန္တု
July 16, 2011 at 11:51 PM Reply
မငယ်နိုင် တယောက်ထဲ မဟုတ်ပါဘူး။
ကျွန်တော်လဲ မလိုတာတွေကို ဖျက်ရင်း အရှိန်လွန်ပြီး လိုတာတွေပါ ရောပါသွားလို့ စိတ်မကောင်းဖြစ်ရတာက ဖြစ်နေကျပါ။
ကျွန်တော် စောစောက တင်လိုက်တဲ့ မှတ်ချက်ကို ပြန်တင်လိုက်ပါမယ်။
July 16, 2011 at 11:54 PM Reply
mg (မောင်) ဆိုတဲ့ ရုရှရောက်စစ်ဗိုလ်က ဒီ ပို့ စ် တခုထဲမှာ တယောက်ထဲ ကွန်မင့် ၂ဝ လောက် အားအားယားယား ရေးပြီး မငယ်နိုင်ကို နှောင့်ယှက်နေတာကိုး။ ဒီ ပို့ စ်မှာ မငယ်နိုင်ကို ဆဲတဲ့ ကွန်မင့်၊ ပုတ်ခတ်တဲ့ ကွန်မင့်၊ လုပ်ကြံဇာတ်လမ်း ကွန်မင့်၊ အရည်မရအဖတ်မရ ကွန်မင့် ၂ဝ ကျော်မှာ ၃ - ၄ ခု က လွဲရင် ကျန်တဲ့ ကွန်မင့် ၂ဝ လောက်က mg (မောင်) တယောက်ထဲ လာရေးသွားတာပါ။ အရိုးအရင်းလေး ကိုက်ရဖို့အတွက် အကုသိုလ်အလုပ်ကို ကြိုးစားပမ်းစား လုပ်နေလိုက်တာ။
အကုသိုလ်ကောင် mg (မောင်) က ဒီမနက်တင် အကုသိုလ် ကွန်မင့် ၃ ခု ထည့်သွားပါရောလား။ ငယ်နိုင်.ယောက်ျား (July 16, 2011 4:47 AM) ဆိုတဲ့ နာမည် သုံးပြီး မငယ်နိုင်ကို မိုက်မိုက်ရိုင်းရိုင်း ဆဲသွားတာ mg (မောင်) ဆိုတဲ့ ရုရှရောက်စစ်ဗိုလ်ပါပဲ။ Anonymous (July 16, 2011 4:48 AM) အနေနဲ့ မငယ်နိုင်ကို ပက်ပက်စက်စက် ဆဲသွားတာလဲ ရုရှရောက်စစ်ဗိုလ် mg (မောင်) ပါပဲ။
တုတ်ကြီး နာမည် သုံးပြီး မငယ်နိုင်ကို မနေ့က အောက်တန်းကျကျ ဆဲသွားတာလဲ mg (မောင်) ပါပဲ။ အိုပါး (ခေတ္တကိုရီးယား)၊ ဦးသူတော် နာမည်တွေ အပါအဝင် နာမည်ပေါင်းစုံ သုံးပြီး ရေးသွားတာလဲ mg (မောင်) ပါပဲ။
စစ်အုပ်စုဖက်က ဝါဒဖြန့်တဲ့အနေနဲ့ အတိုက်အခံတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး မဟုတ်မမှန်လုပ်ကြံဇာတ်လမ်းတွေကို ရေးစားတဲ့ ကြေးစား ဒေါ်လာစား ကလဲ
သူ့ ဘလော့မှာ သူနဲ့ သူ့ အပေါင်းပါတွေက မငယ်နိုင်တင်မက မငယ်နိုင်ရဲ့ အမျိုးသား ကိုကျော်နိုင်နဲ့ သားလေး တိုးနန္ဒ တို့ရဲ့ နာမည်တွေကို သုံးပြီး ရေးနေတာတွေ၊ မဟုတ်မမှန်လုပ်ကြံဇာတ်လမ်းတွေကို ဖန်တီးနေတာတွေကို အရှိန်အဟုန် တိုးမြှင့်ပြီး ဆက်လုပ်သွားမယ်၊ ဆဲလဲ ဆဲမယ် ဆိုပဲ။
mg (မောင်) က တခြားနာမည်တွေကိုသုံးပြီး မငယ်နိုင်ကို ဆဲရုံမက ဒေါ်လာစားကို မြှောက်ပေးနေတာကလဲ စိတ်ဓါတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အရမ်းယုတ်ညံ့တာကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ပြပြီးသား ဖြစ်နေတာပေါ့။
ကျောင်းတက်၊ အလုပ်လုပ်ရင်း သမိုင်းမှန်တွေကို ပြည်သူတွေကို တင်ပြပေးနေတဲ့ မငယ်နိုင်ကို ရုရှရောက်စစ်ဗိုလ်တွေက အုပ်စုလိုက် လာပြီး ဆဲဆိုစော်ကားနှောင့်ယှက်နေတာတွေကို ထည့်စပ်ထားတဲ့ ငယ်နိုင်လမ်း ကဗျာစာသားတွေကို ရုရှရောက်စစ်ဗိုလ် mg (မောင်) နဲ့ ဒေါ်လာစား က တေးသရုပ်ဖော် လာလုပ်ပြသလို ဖြစ်နေပါရောလား။
စစ်တပ်မှ ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်နှင့် ကလေးငယ်ပါ အဓမ္မပြုကျင့်ဟု ကြေညာချက် ထုတ်ပြန် (၁) says:
July 17, 2011 at 12:23 AM Reply
စစ်တပ်မှ ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်နှင့် ကလေးငယ်ပါ အဓမ္မပြုကျင့်ဟု ကြေညာချက် ထုတ်ပြန် (၁)
ရေးသားသူ - ကန္တာရ၀တီတိုင်း(မ်)
မြန်မာအစိုးရစစ်တပ်များသည် အရွယ်မရောက်သေးသော ရှမ်းကျောင်းသူ တဦးနှင့် ၉ လ ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေသော ရှမ်းအမျိုးသမီး တဦး အပါအဝင် ရှမ်းအမျိုးသမီး ၄ ဦးကို ဇူလိုင်လ ၅ ရက်နေ့က အဓမ္မ ပြုကျင့်ခဲ့ကြောင်း ရှမ်းအမျိုးသမီးရေးရာ ဆက်သွယ်လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်ရေး အသင်း (SWAN)နှင့် ရှမ်းလူ့အခွင့်အရေး မဏ္ဌိုင် (SHRF)တို့က ဆိုသည်။
ခြေလျင်တပ်ရင်း (ခလရ) ၅၃၁ မှ အစိုးရစစ်တပ်များသည် ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်း ကျေးသီးမြို့နယ်ရှိ ဝမ်လွိုင်ကျေးရွာတွင် နေထိုင်သော အသက် ၁၂ နှစ်ရှိ ကျောင်းသူ နန်းမွန်း၊ အသက် ၅၀ နှစ်ရှိ မုဆိုးမ နန်းစံ၊ အသက် ၃၀ နှစ်ရှိ ကိုယ်ဝန်သည်နန်းလွတ်နှင့် အသက် ၃၅ နှစ်ရှိ နန်းဖုန်းတို့ကို လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ အကြမ်းဖက်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်ဟု ယမန်နေ့က SWAN နှင့် SHRF အဖွဲ့တို့က ကြေညာချက် ထုတ်ပြန်သည်။
“မုဒိန်းကျင့်ခံရတဲ့ သူတွေက စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကတော့ သူတို့ တော်တော် ထိခိုက်ခံစားနေရတယ်ပေါ့နော့်။ ဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင် အသက်အရွယ်လည်း သိတဲ့ အတိုင်းပဲ။ တချို့ဆို ၁၂ နှစ်ပဲ ရှိသေးတယ်။ ကလေးလေးပဲ ရှိသေးတယ်။ တချို့ဆို အသက် ၅၀ လောက် ရှိပြန်ရော” ဟု ရှမ်းအမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ယိင်းဟာန်ဖက ကန္တာရ၀တီတိုင်း(မ်)ကို ပြောသည်။
စစ်တပ်မှ ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်နှင့် ကလေးငယ်ပါ အဓမ္မပြုကျင့်ဟု ကြေညာချက် ထုတ်ပြန် (၂) says:
July 17, 2011 at 12:27 AM Reply
စစ်တပ်မှ ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်နှင့် ကလေးငယ်ပါ အဓမ္မပြုကျင့်ဟု ကြေညာချက် ထုတ်ပြန် (၂)
နန်းမွန်းမှာ သူမ၏ နေအိမ်၌ သူ့မိခင် ရှေ့တွင် ပြုကျင့်ခံရပြီး၊ မိခင်က သူမကို အကာအကွယ် ပြုသောအခါ ရိုက်နှက်နှိပ်စက်ခံခဲ့ရကြောင်း၊ အလားတူ နန်းစံမှာ သူမ၏ နေအိမ်၌ ပြုကျင့်ခံခဲ့ရကြောင်း၊ နန်းလွတ်မှာ ကြမ်းပြင်ပေါ်သို့ ကြမ်းတမ်းစွာ တွန်းပစ်ခံရပြီး ပြုကျင့်ခံခဲ့ရကြောင်း၊ နန်းဖုန်းမှာ ကျေးရွာအပြင်၌ ဖမ်းဆီးနှိပ်စက်ခံရပြီး၊ ယာတောတဲ တတဲတွင် ပြုကျင့်ခံခဲ့ရကြောင်း ကြေညာချက်တွင် ရေးသားဖော်ပြထားသည်။
SWAN တာဝန်ခံ နန်းဆိုင်မွန်းက “မြန်မာစစ်အစိုးရစစ်တပ်တွေဟာ ကလေးသူငယ်တွေ၊ ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်တွေ၊ အသက်အရွယ် ရလာတဲ့ သူတွေကို မုဒိန်းကျင့်ဖို့ အခွင့်ရနေဆဲ ဖြစ်တယ်။ ကျမတို့ အဲဒီစစ်ရာဇဝတ်မှုကို ပြင်းပြင်းထန်ထန် ကန့်ကွက်ရှုတ်ချပါတယ်” ဟု ကြေညာချက်ထဲတွင် ပြောကြားထားသည်။
အစိုးရတပ်များသည် ရှမ်းပြည်တပ်မတော်မြောက်ပိုင်း SSA-N ကို တပ်အင်အား ၃၀၀၀ ကျော်ဖြင့် ပြီးခဲ့သည့် မတ်လ ၁၃ ရက်နေ့က စတင်တိုက်ခိုက်လာခဲ့ကြောင်း၊ ၎င်းတို့သည် SSA-N ကို ထိုးစစ်ဆင်ရာတွင် ရှမ်းအမျိုးသမီးများကို အဓမ္မ ပြုကျင့်နေခြင်းဖြစ်ကြောင်း ဖော်ပြထားသည်။
စစ်တပ်မှ ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်နှင့် ကလေးငယ်ပါ အဓမ္မပြုကျင့်ဟု ကြေညာချက် ထုတ်ပြန် (၃) says:
စစ်တပ်မှ ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်နှင့် ကလေးငယ်ပါ အဓမ္မပြုကျင့်ဟု ကြေညာချက် ထုတ်ပြန် (၃)
ယခု ရှမ်းအမျိုးသမီးများကို အဓမ္မ ပြုကျင့်ခဲ့သော အစိုးရစစ်တပ်များ အထဲတွင် အရာရှိလည်းကောင်း၊ တပ်သားလည်းကောင်း ပါဝင်ကြောင်း ယိင်းဟာန်ဖက ဆက်ပြောသည်။
“သူတို့ ဖြတ်လေးဖြတ်ကတည်းက စီစဉ်ထားပြီးသားလေ။ စစ်ဗျူဟာထဲမှာ ပါတဲ့ အသုံးချရေး တခုပေါ့။ အမျိုးသမီးတွေကို မုဒိန်းကျင့်ဖို့ အဲဒီဖြတ်လေးဖြတ် အစီအစဉ်ထဲမှာ ပါပြီးသားပဲလေ။ အဲကြောင့် အမျိုးသမီးတွေကို လက်နက်သဖွယ်ပေါ့နော့် လက်နက်တခု အနေနဲ့ သဘောထားပြီးတော့ သူတို့က ပြည်သူတွေ ကြောက်အောင် အဲလိုမျိုး လုပ်တယ်ပေါ့နော့်။ အမျိုးသမီးတွေကို ပစ်မှတ်ထားတယ်လေ။ မုဒိန်းကျင့်တဲ့ နည်းနဲ့ ပြည်သူတွေ ကြောက်အောင် ဆိုပြီးတော့မှ လုပ်တယ်ပေါ့နော့်” ဟု ၎င်းက ပြောသည်။
စစ်တပ်မှ ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်နှင့် ကလေးငယ်ပါ အဓမ္မပြုကျင့်ဟု ကြေညာချက် ထုတ်ပြန် (၄) says:
July 17, 2011 at 12:31 AM Reply
စစ်တပ်မှ ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်နှင့် ကလေးငယ်ပါ အဓမ္မပြုကျင့်ဟု ကြေညာချက် ထုတ်ပြန် (၄)
အပစ်ရပ် ရှမ်းပြည်တပ်မတော်မြောက်ပိုင်းသည် ယခင်နှစ်က မြန်မာအစိုးရ ဖိအားပေးနေသော ပြည်သူ့စစ် အသွင်ပြောင်း ဖွဲ့စည်းရေးကို သဘောမတူသော အဖွဲ့ ဖြစ်သည်။ ရှမ်းပြည်တပ်မတော်မြောက်ပိုင်းနှင့် ရှမ်းပြည်တပ်မတော်တောင်ပိုင်း SSA-S တို့သည် ပူပေါင်းလိုက်ပြီဖြစ်ကြောင်း ပြီးခဲ့သည့် မေလ ၂၁ ရက်နေ့တွင် ပြုလုပ်ခဲ့သော ၅၃ နှစ်မြောက် ရှမ်းပြည်တော်လှန်ရေး အခမ်းအနားတွင် SSA-S ၏ အကြီးအကဲ ဒု-ဗိုလ်ချုပ်ကြီး စဝ်ရွက်စစ်က မီဒီယာများကို ပြောဆိုခဲ့သည်။
ကချင်ပြည်နယ်တွင်လည်း ဇွန်လ ၉ ရက်နေ့က စတင်ဖြစ်ပွားခဲ့သော အစိုးရတပ်နှင့် ကချင်လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် (KIO) တို့အကြား တိုက်ပွဲ အတောအတွင်းတွင် အစိုးရစစ်တပ်များက ကချင်အမျိုးသမီး ၁၈ ဦးကို အဓမ္မ ပြုကျင့်ခဲ့သည်ဟု ကချင်အမျိုးသမီးအဖွဲ့-ထိုင်းနိုင်ငံ KWAT က ဇွန်လ ၂၁ ရက်နေ့တွင် ကြေညာချက် ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
July 17, 2011 at 12:37 AM Reply
July 17, 2011 at 12:38 AM Reply
More than 1800 rape cases by Burmese army soldiers
July 17, 2011 at 12:40 AM Reply
နအဖ စစ်တပ်မှ စစ်ဗိုလ်၊ စစ်သားများက ကျူးလွန်ခဲ့သော မုဒိမ်းမှုပေါင်း ၁၈ဝဝ ကျော်ကို မှတ်တမ်းတင်ထားပြီ (၁) says:
July 17, 2011 at 2:12 AM Reply
နအဖ စစ်တပ်မှ စစ်ဗိုလ်၊ စစ်သားများက ကျူးလွန်ခဲ့သော မုဒိမ်းမှုပေါင်း ၁၈ဝဝ ကျော်ကို မှတ်တမ်းတင်ထားပြီ (၁)
နအဖ စစ်တပ်မှ စစ်ဗိုလ်၊ စစ်သားများက ကျူးလွန်ခဲ့သော မုဒိမ်းမှုပေါင်း ၁၈ဝဝ ကျော်ကို မှတ်တမ်းတင်ထားပြီ (၂) says:
July 17, 2011 at 2:14 AM Reply
နအဖ စစ်တပ်မှ စစ်ဗိုလ်၊ စစ်သားများက ကျူးလွန်ခဲ့သော မုဒိမ်းမှုပေါင်း ၁၈ဝဝ ကျော်ကို မှတ်တမ်းတင်ထားပြီ (၂)
July 17, 2011 at 2:30 AM Reply
"မြန်မာစစ်တပ်က မုဒိမ်းကျင့်ခြင်းကို လက်နက်သဖွယ် သုံးနေတယ်" ဟု ဒေါ်စုပြောပြီ (ဗီဒီယို) says:
July 17, 2011 at 2:39 AM Reply
"မြန်မာစစ်တပ်က မုဒိမ်းကျင့်ခြင်းကို လက်နက်သဖွယ် သုံးနေတယ်" ဟု ဒေါ်စုပြောပြီ (ဗီဒီယို)
"မြန်မာစစ်တပ်က မုဒိမ်းကျင့်ခြင်းကို လက်နက်သဖွယ် သုံးနေတယ်" ဟု ဒေါ်စုပြောပြီ (ဗီဒီယို) ခေါင်းစဉ်ကို နှိပ်ပြီး ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။)
July 17, 2011 at 2:40 AM Reply
ရုရှက ထမင်းစားပီး ခွေးချီးပါတဲ့ နွားတချို့ကို ပြောလိုက်ချင်တယ်။ မင်းတို့မှာ အားအားယားယား အလုပ်အကိုင် မရှိဘူးလား? မိန်းမတယောက်ကို ယောကျာ်းတန်မဲ့ အောက်တန်းကျကျ တိုက်ခိုက်နေတာ မင်းတို့ မရှက်ဘူးလား? ရှက်ရကောင်းမှန်းကော သိကြလား? မင်းတို့စားနေတဲ့ ထမင်းလုပ်တိုင်းက ငါတို့ရဲ့ ချွေးစက်တွေ ဆိုတာကော သဘောပေါက်ကြလား? ကိုယ်ကို ကိုယ် ရှက်တတ်ကြစမ်းပါကွာ၊ ယောကျာ်းထဲမှာ မင်းတို့လောက် မိန်းမလို မိန်မရဆန်ပီး အရှက်မရှိတာ ငါတခါမှ မမြင်ဖူးသေးဘူး..
မင်းတို့ ကတော့ တကယ့် ဘုရားစူး ယောကျာ်းလေးလို့ ပြောရမယ့် သတ္တ၀ါတွေဘဲ။
July 17, 2011 at 3:26 AM Reply
ဒါနဲ့ မငယ်နိုင်ကိုလည်းပြောချင်တယ် ရုရှားရောက်နေတဲ့အထဲမှာ မငယ်နိုင်နဲ့အသက်ရွယ်တူတစ်ယောက်မှ မပါဘူး.. အနည်းဆုံး အသက် ၁၅ ငယ်တယ်.. အဲ့လိုကိုယ့်သားအရွယ်တွေနဲ့ ဘာလို့ဖတ်ပြီး ရန်ဖြစ်နေရာတာလဲ.. ဒီလိုရက်မျိုးမှာ ဒီလိုပိုစ့်မျိုးတင်နိုင်တဲ့ အသက် ၄၀ ကျော်မိန်းမ တစ်ယောက်ကိုလည်း တစ်ခါမှမမြင်ဖူးဘူး.. ဘုရားစူး အသက် ၄၀ လို့ ပြောရမယ့် မိန်းမကြီးပဲ
July 17, 2011 at 11:32 AM Reply
စောစောစီးစီး စစ်ခွေး mg က အစ်မငယ်နိုင်ကို ပိုးစိုးပက်စက်ဆဲထားတာတွေနဲ့တန်းတိုးနေပြန်ပီ..
အစ်မငယ်နိုင်ကို Anonymous (July 17, 2011 4:22 AM) + ငယ်နိုင်.ယောက်ျား နာမည်တွေနဲ့ ဆဲထား တဲ့ မှတ်ချက် ၂ ခုလုံးကို စစ်ခွေး mgေ၇းသွားတာပါ..
အဲဒီ တိရစ္ဆာန်ကောင် mg က အစ်မငယ်နိုင်ကိုဆဲတဲ့မှတ်ချက်တခု၊ အစ်မငယ်နိုင်ကိုတိုက်ခိုက်တဲ့မှတ်ချက်တခုဆို ဘယ်လောက်၇လဲမသိဘူး..
သူ့ပထွေးတွေက အဲဒီတိရစ္ဆာန်ကောင်ကိုပိုက်ဆံပေးပီး စစ်အုပ်စုကိုဝေဖန်သူတွေကို ဆဲခိုင်း၊တိုက်ခိုက်ခိုင်းထားတာနေမယ်..
ဒါကြောင့် mg က အပိုဆုငွေလဲ၇၊ သူခွေးပီသတာကိုသက်သေပြပီးသားလဲဖြစ်အောင် အစ်မငယ်နိုင်ကိုနေ့စဉ်နဲ့အမျှလာလာဆဲနေတာနေမယ်..
၇ု၇ှားက mg က သူ့ပထွေးတွေက ရှုးတိုက်တိုင်း လာလာကိုက်နေတဲ့ခွေးစစ်စစ်ဘဲ..
ဒီမနက်ဝင်လာတဲ့ အောက်ကမှတ်ချက် ၅ ခုလုံးကို ၇ု၇ှားကစစ်ခွေး mgေ၇းသွားတာပါ..
1 - Anonymous (July 17, 2011 3:26 AM)
2 - မောင် (July 17, 2011 3:31 AM)
3 - Anonymous (ဒေါက်တာလှိုင်မြင့်) (July 17, 2011 3:32 AM)
4 - Anonymous (July 17, 2011 4:22 AM)
5 - ငယ်နိုင်.ယောက်ျား (July 17, 2011 7:03 AM)
July 17, 2011 at 12:34 PM Reply
သီဟပူရ ဘလော့ဂ်ရပ်ဝန်းသားနဲ့ စစ်ခွေး ရိုက်သူ - ဓမ္မစင်္ကြာနေ့မရှောင် ၀ါတွင်းကာလမရှောင်နိုင်လောက်အောင် အကုသိုလ်ပွားကြတဲ့ စိတ်ပုံမှန်မဟုတ်သူတွေ ပေးတဲ့ အကုသိုလ်တွေကို မိမိဆီမကူးစက်ပါစေနဲ့။ သူတို့ပေးတဲ့ အကုသိုလ်ကို အစ်မ မရပါဘူး။ မြတ်စွာဘုရား တရားဦးဟောတဲ့ နေ့မှာတောင် စိတ်နှလုံးမငြိမ်းချမ်းနိုင်ကြတာကိုတောင် ဂရုဏာ သက်မိပါတယ်။ ညစ်ညမ်းတာတွေကိုတော့ ဖျက်လိုက်ပါတယ်။ ကျန်တဲ့ လာစော်ကားတာတွေကိုတော့ ဒီကဗျာထဲကအတိုင်း ဟုတ်တယ်ဆိုတာ သက်သေထူတဲ့အနေနဲ့ ချန်ထားပေးပါတယ်။ သူတို့ပေးတဲ့ အကုသိုလ်ကို အစ်မ မရပေမဲ့ ကျန်တဲ့စာလာဖတ်သူတွေ ရကြတဲ့အတွက် စိတ်မကောင်းပါဘူး။ ဒါကြောင့် Comment moderation ခဏ ပြန်လုပ်ထားပါတယ်။ တခါတခါ ဖေါက်ပြန်သောင်းကျန်းတာ အတိုင်းအဆမရှိဖြစ်လာရင် ဒီလိုပဲ Moderation လုပ်ရတတ်ပါတယ်။ နောက်တော့လည်း အရှိန်ကုန်ရင် ပြန်ငြိမ်သွားတာပဲ။ စိတ်မကောင်းတာက ဗုဒ္ဓဘာသာ တရားအားလုံးရဲ့ အနှစ်ကျဉ်းချုပ် ဓမ္မစင်္ကြာတရားဟောတဲ့ ၀ါဆိုလပြည့်နေ့နဲ့ မြတ်စွာဘုရားက အဘိဓမ္မာ ပဌာန်းတရားတော်ကြီးကို ဟောကြားနေတဲ့ ၀ါတွင်းကာလမှာတောင် လာပြီး မဖွယ်မရာတွေ ရေးပြီး အကုသိုလ် ယူတာတာကိုပါ။ သူတို့အကုသိုလ်နဲ့ သူတို့ရှိပါစေ။ သဗ္ဗေသတ္တာ ကမ္မဿကာ ပါ။
July 17, 2011 at 3:40 PM Reply
ဒေါက်တာ လှိုင်မြင့် အစစ်အမှန်ရဲ့ ငယ်နိုင်အပေါ် သဘောထား
Subject: Re: [ဒီမိုဝေယံ] New comment on နှစ်ကူးနှစ်ဦးမှာ ခိုးကူးသီချင်းတွေ ဝေနေတဲ့ အတာသကြ....
To: demo waiyen
ကျနော်လဲ မအားတာနဲ့ မဖွင့်ဖြစ်တာ အခုလိုပို့ ပေးလာတာ အထူးကျေးဇူးပါ ။ ငယ်နိုင် ဆွေးနွေးလာတာ နဲ့ ဆွေးနွေးလာတဲ့ပုံစံက လေးစားစရာပါဘဲ . အမြင်မတူပေမဲ့ ဆွေးနွေးချက်ကိုက စိတ်ထားမြင့်တယ်ဆိုတာပေါ်လွင်နေပါတယ် ။ ကြိုက်တယ်ဗျာ အဲဒီလို လူကြိးဆန်ဆန်ဆွေးနွေးရတာ ။ တချို့ တော်တော်များများက ငါလိုဆရာတဆူ ကိုဘာမှတ်လဲ ဆိုတဲ့ပုံစံတွေနဲ့ဖဲ့နေကြတာကို တော်တော်လေးစိတ်ပျက် နေရတဲ့အခါမျိုးမှာ ငယ်နိုင်ဆွေးနွေးလာတာက သူ့ စာပေအဆင့်အတန်ုး နဲ့ သူ့ စိတ်ထားမြင့်တာ ကို ပြသလိုက်တာပါ ။ ၀မ်းသားတယ်ဗျာ ။
တချို့ ဆိုဒ်တွေမှာဆို တစိပ်ကို တအိတ် ဖြစ်အောင် ချဲ့ ကားဝေဖန်တတ် တာတွေက စိတ်ပျက်စရာတွေပါ ။
သူဆွေးနွေးထားသလို ယဉ်ကျေးမှု ကိုကျနော်က အဓိက ဇောင်းပေး ဆွေးနွေးထားတာမဟုတ်ပါဘူး ။ ကျနော်အဓိက ဇောင်းပေးထားတာက မြန်မာတို့တန်ဖိုးထားရတဲ့ နှစ်သစ်ကူး ကြိးက ခိုးကူးသိချင်းဖြစ်နေတာ နမိတ် မကောင်းတာကိုပြောတာပါ ။ ကျနော်ကိုယ်တိုင် ဇော်ဝင်းထွဋ် ကိုလေးဖြူသီချင်းတွေ ကြိုက်လို့ဆိုနေတာပါ ။ ကျနော်တို့ ငယ်ငယ်က ဆိုခဲ့ကြတဲ့ ( အဖိုးကြိးအိုခါးကုန်းကုန်း ) ဆိုတာကိုက အင်္ဂလိပ်သီချင်းလား စပိန်သီချင်းလား ပြင်သစ်ကလဲ သူတို့ သီချင်းလို့ ငြင်းနေကြရတဲ့ သီချင်းပါ ။ အဂ်လိပ်လိုကတော့ ( POLLY WOLLY DOODLE ) မြန်မာလိုတော့ ကလေးသီချင်း ဖြေးဖြေးလေးပေါ့ ။ မြန်မာလိုကဆိုရရင် ပျင်းစရာကြိွးှအင်္ဂလိပ်လိုကတော့ အရမ်း သွက်တယ် ။ အင်္ဂလိပ်လိုကတော့ စကားလုံးမြန်မြန် နဲ့ ဆိုတော့ ကလေးတွေ လိုက်ဆိုဖို့ခက်ခက်ပါ ။
July 17, 2011 at 3:41 PM Reply
ဒေါက်တာ လှိုင်မြင့် အစစ်အမှန်ရဲ့ ငယ်နိုင်အပေါ် သဘောထား အဆက်
တလောက ၂၀၀၀-ခုနစ် Sydney Olympic မှာ အခန်းအနားဖွင့်ပွဲ ပ်ိတ်ပိတ်ပွဲမှာ ဖြေဖျော်သွားတဲ့ သီချင်းပေါ့ ( DOWN UNDER by Men At Work ) သိချင်းကိုနားထောင်ကြည့်ပါ ။ KOKOOBARA ( ဗမာလိုတော့- သစ်ပင်ပေါ်မှာထိုင်နေတဲ့ တောက်တဲ့ သီချင်းလေးပါ ) ကလေးတေးသီချင်းကို ခိုးယူထားတယ်ဆိုပြိး အခု ဒေါ်လာ ( ၅- သန်း -ထင်တယ် ) တရားစွဲဆိုထားပါပြီ ။ ကျနော်တို့ အကြိမ်ကြိမ်နားထောင်ကြည့်တာ မမှီဘူးဗျား ။ ဂီတပညာရှင်တွေကတော့ ခိုးချထားတာ ဟုတ်တယ်ဆိုပြိး ထောက်ခံနေကြတယ် ။ သီချင်းက အခုခေတ် အဲဒီလောက်ကို ဆိုညွှန်းထားတာပါ ။
သင်္ကြန်မိုး ဇါတ်လမ်းက တလောကဆိုရင် ဂျပန်လို ဘာသာပြန်ပြိး ဂျပန်မှာ ပြသမယ်ဆိုတာအထိ ကြားမိခဲ့ပါတယ် ။ အဲဒီလိုပြသလို့ ခဲ့ရင် ပြသနာ နှစ်ခုဖြစ်လာနိုင်ပါတယ် ။
( ၁ ) ဂျပန်ပြည်မှာလဲ အဲဒီတရုတ်သီချင်းကို ဂျပန်သံစဉ်နဲ့ ဆိုပြိး ဂျပန်လူမျိုးတွေ နားနဲ့ ယဉ်ပါးနေတဲ့သီချင်းတွေ ပါနေပါတယ် ။ အဲဒါဆိုဂျပန်တွေက ကျနော်တို့ နိုင်ငံရဲ့ အမွန်အမြတ် နှစ်သစ်ကူး ဇါတ်လမ်းကြိး ကျနော်တို့ ဂုဏ်ယူနေတဲ့ ဇါတ်လမ်းကြိးဟာ ပင်တိုင် နောက်ခံသီချင်းကြိးက ကော်ပီကြိးပါလားလို့အသေအခြာပြောလါကြမယ် ။ မင်းတို့ မှာ ဒီလောက်အဆင့် သံစဉ်ကို သိစပ်နိုင်တဲ့သူတွေတောင်မရှိဘူးလား ဖြစ်လာပါမယ် ။
နိုင်ငံတော်နဲ့လူမျိုးပါထိခိုက်လာပါမယ် ။ အရည်အချင်းမရှိတာသွားဝန်ခံသလိုဖြစ်နေတဲ့အပြင် မင်းတို့ နိုင်ငံမှာ ဒီလိုဘဲ ခိုးချနေတာဘဲလား အထင်ခံလာရပါမယ် ။
ဒီနေရာမှာ ငယ်နိုင်ပြောသလို ( ခိုးကူး ) ဆိုတဲ့ဝေါဟာရကို သွားအကွန့် တက်လို့ မရတော့ဘူး ။ သူတို့ နိုင်ငံတွေမှာ ဒါကို ( ခိုးကူးတယ် ) ဘဲသတ်မှတ်ထားတာလေ ။
( ၂ ) တကယ်လို့ဂျပန်လို ဘာသာပြန် နောက် ထပ်ပြိးကျော်ကြားလာလို့တရုတ် ကိုးရိယားတို့ ပါ ဘာသာပြန်ရင် အောင်မြင်တဲ့ ဇါတ်လမ်းလဲဖြစ်နိုင်ပါတယ် ။ အဲဒီအချိန်ကျမှ တရုတ်မူလသီချင်းရှင်က တရားစွဲလာရင် သင်္ကြန်မိုး ပိုင်ရှင်တွေ ရှင်းကြရတာ အကြောင်းမဟုတ်ပေမဲ့ နိုင်ငံနဲ့ လူမျိုး ဂုဏ်သိက္ခာကိုပါ တွဲဖက် ထိခိုက်လာနိုင်ပါတယ် ။
နောက်တချက်ကလဲ ( သင်္ကြန်မိုး ပင်တိုင်သီချင်းဖြစ်တဲ့...သင်္ကြန်မိုးလေးရယ် စိုရုံ့ဖြန်းပက်အုံး ) အဲဒီသီချင်းဟာ တရုတ် နဲ့ ဂျပန်ပြည်မှာ ညကလပ်တွေမှာ စုံတွဲတွေ တွဲကတဲ့ သီချင်းအဖြစ်လက်ခံထားတဲ့ သီချင်းပါ ။ ကျနော်တို့ က အမျိုးသမိးလေးတွေ ချည်း သက်သက် နှစ်ကူး အခါတော်သီချင်းအဖြစ်သုံးနေမိလျှက်ဖြစ်နေတာပါ ။ ဥပမာပေးရရင် အနောက်နိုင်ငံတွေမှာ ပန်းရောင်ဆိုရင် မိန်းခလေးအရောင်ပေါ့ ကလေးကစ စိတ်ထဲစွဲနေပြီ ။ ယျောာ်းလေးတယောက်က ပန်းရောင်ဝတ်မိရင် ၀ိုင်းအကြည့်ခံရပြီဘဲ ။ အခြောက်လားပေါ့ ။ ယျောာ်းလေးငယ်တယောက်ကိုသွားဝတ်ပေးလို့ ကတော့ ထအော်ငိုတော့တာ ။ အဲဒီလိုသူတို့စုံတွဲ ကဲတဲ့သီချင်းကို ကျနော်တို့အိမ်ဥိးခန်းတင်မိလျှက်ဖြစ်နေတာပါ ။
ဒီလိုဘဲ ကျနော်ဟာ မြန်မာပြန်ဆို သီချင်းတွေကို ကြိုက်ပါတယ် ။ ဆိုနေတာဘဲ ။ ဒါပေမဲ့ နိုင်မြန်မာ ပြန်ထားတဲ့ ( ကမ္ဘာမကျေဘူး ) ( DUST IN THE WIND- by -KANSAS ) သီချင်းကြတော့ ဒါတော်လှန်ရေး ဒီမိုရရေစီ ရေးအတွက် အမျိုးသားမာန် အမျိုးသားအရေးဖြစ်လာတော့ ကော်ပီကိုကျနော်လက်မခံနိုင်တော့ဘူး ။ ညကပ်သီချင်း ဘာသီချင်းဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ ကျနော်လက်ခံလို့ ရသေးတယ် ။ ကြိုက်တယ် ဆိုတယ် ။ ဒါတွေနဲ့ ကြိးပျင်းလာခဲရသူပါ ။ ဘိုဘိုဟန်ဆိုတာ စိုးပိုင်ဆိုတာ ဆို မူရင်းထက်ကိုကြိုက်ပါသေးတယ် ။
အမျိုးသားသရုပ်ကို ထင်ဟပ်လာတဲ့ ကိစ္စ တွေကိုတော့ ကော်ပီဆိုတာ မသင့်တော်ပါဘူး ။
July 17, 2011 at 3:42 PM Reply
နောက်တခု က အရေးတော့မကြိးပါ ။ ယဉ်ကျေးမှုနဲ့ဘာသာရေးမတူတာပါ ။ ဘာသာရေးက ယဉ်ကျေးမှုနဲ့ဆက်နွှယ်နေပေမဲ့ တကဏ္ဍဆီပါ ။ ကျနော်တို့က ဗုဒဘာသာကို အိန္ဒီယ ကဆင်းသက်လာတာ မဟုတ်ပါဘူး ။ နီပေါနိုင်ငံကနေ ဆင်းသက်လာတာပါ ။ အိန္ဒိယ လူမျိုးဘာသာမဟုတ်ပါ ။ မာကဓ လူမျိုး ဘာသာပါ ။ နီပေါနိုင်ငံကလူမျိုး တမျိုးပါ ။ ယခုလူဥိးရေ သောင်းဂဏန်းလောက်ဘဲကျန်ပါတော့တယ် ။ ကျနော်တို့ မြန်မာတွေရဲ့မူလဘာသာက ကမ္ဘာဥိးလူသားတိုင်း နတ် ကိုးကွယ်တာပါ ။ အရည်းကြိး ဆိုတာကတော့ မဟာယာနဂိုဏ်းကွဲတခုဖြစ်တဲ့တန္တရမန္တရ ဖြစ်ပြိး ဘာသာစာပေ အတိအကျ မရှိတဲ့ ကိုးကွယ်ရေးဗန်းပြ အယူအဆ တမျိုးသာဖြစ်ပါတယ် ။ မြန်မာနိုင်ငံ သရေခေတ္တရာ ( ပျူ ) နဲ့သုဝဏဘူမိ ( သထုံ ) ပြည်တို့ ကို ဗုဓ္ဒသာသနာတော် ဥိးစွာပြန့် နှံ့ ရောက်ရှိခဲ့ပေမဲ့ ဗုဓ္ဒသာသနာတော် ရောက်ရှိရာအရပ်တိုင်းကို အမြဲနှောက်ယှက်လေ့ရှိတဲ့ ပန်းဥိးလွှတ် သိုင်းဂါထာ မန္တရ တွေ ၀ါးမြိုတာခံရ စမြဲပါ ။ အရည်းကြိးကအရင်ရောက်လာတာမဟုတ်ပါ ။
ဥပမာပေးရရင် ဗုဓ္ဒဘာသာက အရင်ကလက်ခံယုံကြည်နေတဲ့ အယူအဆကို လုံးဝ ပယ်စွန့် ပြိး အယူအယုံအကြည်အသစ်ကို အစားထိုး ပေးတဲ့ဘာသာပါ ။ အရည်းကြိးကတော့ တမလွန်ဘ၀ထက် လက်ရှိ လောက္ကုတ်တရာကို အကျိုးပြဆွယ်ပြိး လူမှုရေးအမြတ်ထုတ်တဲ့ ကျင့်စဉ်သက်သက်ပါ ။ ဖေါက်ပြန်တဲ့ အယူသက်သက်ပါ ။ အရည်းကြိးဘာသာအကျင့်တွေ ယနေ့ တိုင် ကျန်နေတာရှိပါသေးတယ် ။ ဘယ်စာပေကမှ ဘာသာရေးထဲ ထဲ့တောင်မစဉ်းစားပါဘူး ။
နောက်တခု ယိုးဒယားအက ယိုးဒယားသီချင်းကိစ္စပါ ။ ရှေးလူမှုခေတ်ယဉ်ကျေးမှုက နိုင်ငံတခုကိုစစ်နိုင်ရင် အဲဒီနိုင်ငံက ဘဏ္ဍာတော်တွေ လူသူ ပညာရှင်အားလုံး သိမ်းကြုံး ယူငှင်လာကြတာပါ ။ အဲဒီတော့ယိုးဒယားသဘင်သည် တွေပါသယ်လာပြိး နန်းတော်မှာကပြစေရာကနေ ယိုးဒယား အက နဲ့ သီချင်းဖြစ်လာတာပါ ။ ဒါပေမဲ့ အခုကျနော်တို့ကနေ ဆိုနေတာတွေ ကို ယိုးဒယားတွေက သိတောင်မသိကြပါဘူး ။ မြန်မာသက်သက်ဖြစ်နေပါပြီ ။ ဆိုလိုတာကတော့ သူတို့ဆီမှာအခုတိုင်သု့းနေတာနဲ့ တော်လေးကို လမ်းကွဲနေပါပြီ ။
အချုပ်အားဖြင့် ငယ်နိုင်ဆွေးနွေးလာတာ သိပ်ဝမ်းသာပါတယ် ။ ချီးမွှန်းပါတယ် ။ ကနေ့ အင်တာနက်ပေါ် ကလော်တုတ်နေတဲ့ခေတ်မှာ ရှားရှားပါးပါး ဝေဖန်မှုလေးပါ ။ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြန်ကြားပေးပါ ။ ကျနော် အခုပြန်ကြားချက်ကိုဆိုဒ်ပေါ်တော့မတင်ချင်ပါဘူး ။ သူ့ ဆီတော့ ဖြစ်နိုင်ရင် ပို့ ပေးပါ ။
Subject: [ဒီမိုဝေယံ] New comment on နှစ်ကူးနှစ်ဦးမှာ ခိုးကူးသီချင်းတွေ ဝေနေတဲ့ အတာသကြ....
Nge Naing has leftanew comment on your post "နှစ်ကူးနှစ်ဦးမှာ ခိုးကူးသီချင်းတွေ ဝေနေတဲ့ အတာသကြ...":
နိုင်ငံရေးနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အကြောင်းအရာတွေကို လက်ခံပါတယ်။ သင်္ကြန်သီချင်းတွေ ဘယ်ကပေါ်လာတယ်ဆိုတဲ့ ဖြစ်စဉ် Fact အထိ လက်ခံတယ်။ ဒါကို ခိုးတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံ မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှု မဟုတ်တဲ့ ပုံစံနဲ့ သဘောထားတာကိုတော့ လက်ခံလို့မရဘူး။ ယဉ်ကျေးမှု အနုပညာခံစားမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ ယဉ်ကျေးမှုဆိုတာ အမြဲတမ်း လူသားတွေကြားမှာ ကူးလူးဆက်ဆံနေတဲ့အတွက် ဒီသင်္ကြန်သီချင်းတွေဟာ မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှု မဟုတ်ဘူးလို့ ပြောလို့ ဘယ်လိုမှ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ လူတိုင်းက မိမိနှစ်သက်တဲ့ အနုပညာ၊ အစားအယောက် ၀တ်စားဆင်ယင်မှုကို မိမိအသုံးပြုကြမှာသာ ဖြစ်တယ်။ ယဉ်ကျေးမှုဆိုတာဟာ တဦးဆီကတဦး အမွေဆက်ခံကြတာသာ ဖြစ်ပါတယ်။ အခု မြန်မာ့ဇာတ်သဘင်လို့ ပြောတဲ့ မင်းသမီးမင်းသားအကတွေကလည်း ထိုင်းကရတာဖြစ်သလို ရာမလက္ခဏဇာတ်ဆိုတာလည်း အိန္ဒိယကနေ ကူးစက်လာတာသာ ဖြစ်တယ်။ ကျွန်မတို့ အခုကိုးကွယ်နေတဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာကလည်း အိန္ဒိယက လာတာဖြစ်တယ်။ အဲလို မိမိတို့ မြန်မာတွေက မစလို့ မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှုအဖြစ် လက်မခံနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့ ကျွန်မတို့ဟာ ပုဂံအရည်းကြီးခေတ်ကို ပြန်သွားရမည့် သဘောဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။ ယဉ်ကျေးမှုဆိုတာ ကူးလူးဆက်ဆံနေတဲ့ လူသားတွေအကြား တီထွင်ဖန်တီးမှု တိုးတက်မှုတွေကို မျှဝေရင်း ဖြစ်လာကြတာသာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျောက်ခေတ်က အခုတီထွင်ထားတဲ့ အရာတွေဘာမှ မရှိသေးဘူး နောက်ပိုင်း လူ့အဖွဲ့အစည်း သက်တောင့်သက်သာဖြစ်ဖို့အတွက် တီထွင်လာကြရာကနေ မတီထွင်တဲ့သူတွေကလည်း သုံးစွဲကြပါတယ်။ အဲဒီကနေပြီး ယဉ်ကျေးမှုတွေ ထွန်းကားလာပါတယ်။ အနုပညာရသ ခံစားမှု၊ ဘ၀လူနေမှုပုံစံ စတာတွေဟာ ယဉ်ကျေးမှုတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အခုကျွန်မတို့ ကွန်ပြူတာသုံးနေတာလည်း ယဉ်ကျေးမှုတခုပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် သင်္ကြန်သီချင်းတွေကိုတော့ မြန်မာသံစဉ်မဟုတ်ဘူး တရုတ်သံစဉ်တွေမို့ ခိုးယူတယ်လို့ ဘယ်လိုမှ ပြောလို့ မရနိုင်ဘူး။ ပြန်ပြီး ရှယ်တယ်ဆိုတာပဲ ဖြစ်သင့်ပါတယ်။
Posted by Nge Naing to ဒီမိုဝေယံ at April 12, 2011 10:49 PM
July 17, 2011 at 4:07 PM Reply
အထက်က အကြောင်းအရာတွေက ကိုဒီမို ဘလော့ဂ်က http://www.demowaiyan.co.cc/2011/04/blog-post_4135.html အဲဒီပို့စ်မှာ ဒေါက်တာလှိုင်မြင့်ရေးထားတဲ့ ဆောင်းပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီး ကျွန်မ သဘောမတူလို့ မှတ်ချက်ထားခဲ့တာကို ဒေါက်တာလှိုင်မြင့်က ပို့စ်ထဲမှာဆိုရင် သိပ်ရှည်နေမှာစိုးလို့ ကိုဒီမိုကတဆင့် ကျွန်မကို သူဆိုလိုချင်တာကို ပြန်ရှင်းပြထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အပေါ်မှာ တကယ်ဒေါက်တာလှိုင်မြင့်က သူ့ပို့စ်ကို ကျွန်မသဘောမတူလို့ ရေးထားတဲ့ မှတ်ချက်အပေါ် အကြောင်းပြန်ထားတဲ့စာနဲ့ အောက်က သူ့နာမည်နဲ့ လာရေးထားတဲ့ မှတ်ချက်အတုကိုရေးတဲ့သူ အဆင့်အတန်း ဘယ်လို ကွာခြားတယ်ဆိုတာ ဖတ်တဲ့သူတိုင်း သိနိုင်ပါတယ်။ ဖတ်ကြည့်ပါ။
(((((((ဒေါက်တာလှိုင်မြင့် has leftanew comment on your post "ဗေဒါလမ်း နှင့် ငယ်နိုင်လမ်း":
ငယ်နိုင်တစ်ယောက်ကိုတော. ဘေးမဲ.ပေးထားလိုက်ကြပါတော.ဗျာ. အဖက်လုပ်ပြီး ပြောမနေကြပါနဲ.တော.
သူ.စာတွေဖတ်ကြည်.လိုက်တာနဲ. SCHIZOPHRENIA ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာခန်.မှန်းလို.ရပါတယ်
အကြမ်းဖျင်းပြောရရင် ၀ဋ်နာ ကံနာပေါ့ဗျာ
Posted by ဒေါက်တာလှိုင်မြင့် to Nge Naing at July 15, 2011 6:11 AM ))))))
ဒါကြောင့်မို့ ဒီပို့စ်မှာ ကျွန်မ ခဏခဏ ဖျက်နေရတဲ့ ဒေါက်တာလှိုင်မြင့် နာမည်နဲ့ လာရေးထားတဲ့ ဒီမှတ်ချက်ဟာ သူများနာမည်ကို အလွဲသုံးစား လုပ်ထားသလို အဆင့်အတန်းမရှိ တမင်တကာ ပြဿနာလာရှာပြီး အရေမရအဖတ်မရ လာရေးထားတဲ့အတွက်ပါ ဒီလိုလာရေးတာကို လုံးဝလက်ခံမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ သဘောထား မတိုက်ဆိုင်တာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဒေါက်တာလှိုင်မြင့်ကို ကျွန်မ ဘယ်လိုဆွေးနွေးထားတယ်ဆိုတာ အပ်ါက မှတ်ချက်မှာ ဖြစ်စေ အညွန်း ပေးထားတဲ့ Link အတိုင်း လိုက်သွားပြီး ကိုဒီမိုဘလော့ဂ်မှာ ဖြစ်စေ သွားဖတ်ကြည့်ပါ။ ကျွန်မ ကိုဒီမိုဘလော့ဂ်မှာမှ မဟုတ်ဘူး ဘယ်ဘလော့၈်မှာမဆို သဘောထားမတိုက်ဆိုင်တာကို ဒီလိုပဲ ဆွေးနွေးပါတယ်။ အခုဘလော့ကို လာလည်နေတဲ့ ကျွန်မနဲ့ သဘောထား မတိုက်ဆိုင်သူများကို ပြောလိုတာက မိမိနဲ့ သဘောထားမတိုက်ဆိုင်တာကို ပုဆိန်ပေါက် ပေါက်တူးပေါက် မပြောဘဲ အဲလိုယဉ်ယဉ်ကျေးကျေး ဆွေးနွေးတတ်အောင် လေ့ကျင့်ပြီးမှ ဒီဘလော့ဂ်မှာ လာရေးပါလို့ပဲ ပြောချင်ပါတယ်။ ၀ါတွင်းကာလကို ကုသိုလ်နဲ့ယှဉ်ပြီး ဖြတ်သန်းနိုင်ကြပါစေ။
July 17, 2011 at 5:26 PM Reply
ကျနော် မငယ်နိုင် ဘလောက်မှာ ကိုယ်တိုင်တခါမှ တိုက်ရိုက်မရေးခဲ့ပါဘူး ။ ခုကျနော့်န့မည်သု့းရေးနေသူတွေ ဟာ ယောက်ျားတန်မဲ့ အတော်သတ္တိနည်းသူတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတာပြနေတာဘဲ ။ မြန်မာအစစ်ဆိုရင် ကိုယ်ပြောတာ ရေးတာ တာဝန်ခံရဲရပါတယ်။ မြန်မာဘုရင်တွေလက်ထက်က အဲဒီလို ပြတ်သားလွန်းလို့ တိုင်းတပါးတွေက လေးစားခဲ့ကြပါတယ် ။ နံမည်တောင်မခံရဲသူတွေကို ကဝေဖန်လာတာ ထမီဝတ်ထားဖို့ ဘဲ သင့်ပါတယ် ။
July 17, 2011 at 5:50 PM Reply
မှတ်ချက်အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာ။ အဲဒီမှတ်ချက်ကို ဆရာ့မှတ်ချက် မဟုတ်ဘူးဆိုတာ သိလို့ ဖျက်နေတာ လေးကြိမ်ရှိနေပြီ။ နောက်ထပ် အကြိမ်တရာ မကလာတင်လည်း ကျွန်မက မှတ်ချက်အတုတွကို ဘယ်တော့မှ ထည့်ပေးမှာ မဟုတ်ဘူး။
ဒေါက်တာလှိုင်မြင့် ရဲ့ကွန်းမန့်က ဆဲထားတာလဲမဟုတ်၊ ဝေဖန်ထားတာလဲမဟုတ် ဒါပေမယ့် ခုမရှိတော့ဘူး
July 15, 2011 9:14 PM)))))
သာဝမကျသူ သုံးသပ်မတတ်သူရေ - ဒေါက်တာလှိုင်မြင့် အစစ်အမှန်ရဲ့ မှတ်ချက်မဟုတ်လို့ ဖျက်လိုက်တယ်ဆိုတာ သိလောက်ပြီပေါ့နော့်။
July 17, 2011 at 7:53 PM Reply
သဘာဝကျကျသုံးသပ်သူ (အစစ်) မှ
ဒေါက်တာဦးလှိုင်မြင့် နဲ့ မငယ်နိုင် သို့ တင်ပြချက်
လေးစားရတဲ့ ဆရာ ဒေါက်တာဦးလှိုင်မြင့် နဲ့
လေးစားရတဲ့ အစ်မ မငယ်နိုင် တို့ခင်ဗျား
ကျနော် "သဘာဝကျကျသုံးသပ်သူ" (အစစ်) ပါ.. ဒီမိုကရေစီဘလော့တွေမှာ စစ်အုပ်စုကို ဆန့်ကျင်တဲ့ မှတ်ချက်တွေကို ရေးနေတဲ့ ပါမွှားတယောက်ပါ..
ကလိမ်ကကျစ် လုပ်ဖို့ အမြဲ ဥာဏ်နီဥာဏ်နက် ထုတ်ပြီး မိန်းမလိုမိန်းမရ အောက်လမ်းနည်းတွေ သုံးတတ်တဲ့ ရုရှားက စစ်ဗိုလ်တွေက ဆရာ နဲ့ အစ်မ မငယ်နိုင် တို့လို နာမည်ကျော်ကြား လူအများ လေးစားတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေ မပြောနဲ့ .. ကျနော်လို ဘာမဟုတ်တဲ့ ကောင်ကိုတောင် အတုလုပ်ပြီး ရေးသွားတာကို ပြောပြပါရစေ..
မငယ်နိုင်ရဲ့ အခုပို့စ် (ဗေဒါလမ်း နှင့် ငယ်နိုင်လမ်း" ပို့စ်) အောက်က မှတ်ချက်တွေထဲမှာ -
သဘာဝကျကျသုံးသပ်သူ (July 15, 2011 3:19 PM) က အစစ်ပါ..
သဘာဝကျကျသုံးသပ်သူ (July 15, 2011 9:14 PM) က အတုပါ..
July 17, 2011 at 7:56 PM Reply
ကျနော် ကြိုက်တဲ့ အဓိပ္ပာယ် "သဘာဝကျကျသုံးသပ်သူ" ကို nickname အဖြစ် ဖန်တီးပြီး ကျနော့် nickname အဖြစ် သုံးလာတဲ့ "သဘာဝကျကျသုံးသပ်သူ" ဆိုတဲ့ nickname ကို တမင်သက်သက် ဗြောင်ကျကျ ကူးယူပြီး ရေးသွားတဲ့ လူ (သဘာဝကျကျသုံးသပ်သူ (July 15, 2011 9:14 PM)) ဟာ ကျနော် မဟုတ်ပါ..
ဒေါက်တာလှိုင်မြင့် ရဲ့ကွန်းမန့်က ဆဲထားတာလဲမဟုတ်၊ ဝေဖန်ထားတာလဲမဟုတ် ဒါပေမယ့် ခုမရှိတော့ဘူး"
ဆိုပြီး သဘာဝကျကျသုံးသပ်သူ (July 15, 2011 9:14 PM) ဆိုတဲ့ nickname နဲ့ ရေးသွားသူဟာ ရုရှားက စစ်ဗိုလ်တယောက် ဖြစ်ဖို့ များပါတယ်။ ဒါကြောင့် ရုရှားက စစ်ဗိုလ် mg က " ဒေါက်တာလှိုင်မြင့်" နာမည်ကို အလွဲသုံးစားလုပ်ပြီး မငယ်နိုင်ကို "SCHIZOPHRENIA ဖြစ်နေတယ်" ဆိုပြီး မဟုတ်မမှန် လုပ်ကြံပြီး အသားလွတ် တိုက်ခိုက်ထားတဲ့ မှတ်ချက် ကို အလံရှုးလုပ်ပြီး တခုတ်တရ မေးနေတာပါ..
အဲဒီ ရုရှားက စစ်ဗိုလ်က "သဘာဝကျကျသုံးသပ်သူ" ဆိုတဲ့ ကျနော့် nickname ကို ကူးယူပြီး ကျနော့်မှတ်ချက် အောက်ကပ်လျက်မှာ မငယ်နိုင်ကို တိုက်ခိုက်တဲ့ သူ့မှတ်ချက်ကို သူ ဘယ်တုန်းကမှ မသုံးခဲ့ဖူးတဲ့ "သဘာဝကျကျသုံးသပ်သူ" ဆိုတဲ့ nickname နဲ့ ထည့်သွားတာပါ.. အိုင်ပီ ကို စစ်ကြည့်လိုက်ရင် ရှင်းသွားမှာပါ..
သဘာဝကျကျသုံးသပ်သူ (အတု) ရဲ့ မငယ်နိုင်ကို တိုက်ခိုက်တဲ့ မှတ်ချက်ကို ဖတ်မိပြီး အဲဒီ နာမည်ကို မှတ်မိနေတဲ့ စာဖတ်သူတွေဟာ နောက်နောင်ကို "သဘာဝကျကျသုံးသပ်သူ" ဆိုတဲ့ nickname ကို မြင်ရင် ကျနော့်ကို စစ်အုပ်စုနောက်မြီးဆွဲတယောက်လို့ အမှတ်မှားမှာကို စိုးရိမ်လို့ အသိပေးရခြင်း ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျား..
ဒေါက်တာလှိုင်မြင့် (အတု) (= ရုရှားက စစ်ဗိုလ် mg) ရဲ့ မှတ်ချက်ကို ဖျက်ပေးသလို "သဘာဝကျကျသုံးသပ်သူ" ဆိုတဲ့ nickname ကို ကျနော့်မှတ်ချက်ကနေ တမင်သက်သက် ဗြောင်ကျကျ ကူးယူပြီး ရေးသွားတဲ့ သဘာဝကျကျသုံးသပ်သူ (အတု) ရဲ့ မှတ်ချက် (သဘာဝကျကျသုံးသပ်သူ (July 15, 2011 9:14 PM)) ကို ဖျက်ပေးပါ ခင်ဗျား..
"သဘာဝကျကျသုံးသပ်သူ" ဆိုတဲ့ nickname ကို ကျနော် သုံးပြီး ဒီမိုကရေစီဘလော့တွေမှာ စစ်အုပ်စုကို ဆန့်ကျင်တဲ့ မှတ်ချက်တွေကို ရေးလာတာ မငယ်နိုင်ရဲ့ အခုပို့စ် ("ဗေဒါလမ်း နှင့် ငယ်နိုင်လမ်း" ပို့စ်) မှာမှ မဟုတ်ပါ..
မငယ်နိုင်ဘလော့မှာဆိုရင် အခုတလော ကျနော် မှတ်ချက်ပေးထားတာတွေ (စစ်အုပ်စုရဲ့ လက်ကိုင်တုတ် စစ်ကျွန်တွေ မဟုတ်တာ ရေးထားတဲ့ မှတ်ချက်တွေကို ပြန်ချေပတဲ့ မှတ်ချက်တွေ) အောက်က ပို့စ်တွေမှာ ရှိပါတယ်..
(၁) "နောက်နှစ် ဒီဇင်ဘာမှာ တကယ်ပဲ ကမ္ဘာပျက်တော့မလား"
သဘာဝကျကျသုံးသပ်သူ (July 1, 2011 1:31 PM)
(၂) "ရုရှားရောက် ပညာတော်သင်များရဲ့ အတုယူသင့်သော ဆိုက်များနှင့် မြန်မာ့တပ်မတော်ရဲ့ အတုမယူသင့်သော လုပ်ရပ်များ"
သဘာဝကျကျသုံးသပ်သူ (June 11, 2011 11:57 PM)
July 17, 2011 at 9:21 PM Reply
သူများနာမည်နဲ့ အတုလာရေးတဲ့ မှတ်ချက်မှန်း အခုမှသိလို့ အပေါ်က မှတ်ချက်ကို ဖျက်ပေးလိုက်ပါတယ်။
July 17, 2011 at 10:03 PM Reply
အသက် ၄၀ ကျော်မိန်းမကြီးတစ်ယောက် ဦးစီးပြီး အလုပ်ကြီးအကိုင်ကြီးလုပ်နေကြတာပဲ
ဒီမနက်ဝင်လာတဲ့ အောက်ကမှတ်ချက် ၃ ခုပါ
ငယ်နိုင်.ယောက်ျား = ဒေါက်တာလှိုင်မြင့် = မောင် = Anonymous
July 18, 2011 at 12:31 PM Reply
"သဘာဝကျကျသုံးသပ်သူ" ဆိုတဲ့ ကျနော့် nickname ကို တမင်သက်သက် ဗြောင်ကျကျ ကူးယူပြီး ရေးသွားတဲ့ -
( သဘာဝကျကျသုံးသပ်သူ (July 15, 2011 9:14 PM) )
ရဲ့ မငယ်နိုင်ကို တိုက်ခိုက်တဲ့ မှတ်ချက်ကို ဖျက်လိုက်တာ ကျေးဇူးပါ..
July 18, 2011 at 12:33 PM Reply
July 18, 2011 at 11:32 PM Reply
အသက်တွေသာ တစ်နှစ်ထက် တစ်နှစ် ပိုကြီးသွားတယ် အတွေးအခေါ်တွေက တက်မလာပါလား
ဘလော့ကလည်း ကြာလေ စုတ်ပျက်သက်လေပဲ
July 18, 2011 10:08 PM))))
ဇော်မျိုးက ဇော်မျိုးဆိုတဲ့ နာမည်နဲ့ ဒီဘလော့ဂ်မှာ တခါမှမရေးဖူးဘူး။ ဇော်မျိုးအ အစစ်က သခင်မျိုးဟေ့ဒို့ မြန်မာဆိုပြီး သူ့ ပရိုဖိုင်းပုံနဲ့ပဲ ရေးပြီးနှိပ်လိုက်ရင် Blogger profile ကို အမြဲရောက်ပါတယ်။ အခုရေးထားတာ ဇော်မျိုးအတုပဲ။ အတုဖြစ်ဖြစ် အစစ်ဖြစ်ဖြစ် ဒီလိုမှတ်ချက်မျိုးကို ဖျက်တယ်။
July 20, 2011 at 10:14 AM Reply
ရုရှားက ခွေးရူး mg (ခေါ်) ဦးသူတော် က နေရာတိုင်းမှာ မစင်စွန့်သွားပြန်ပြီ..အစ်မ.. ((Attention လိုချင်လို့ အစ်မဘလေ့ာဂ်မှာ အမျိုးမျိုး လာနှောင့်ယှက်နေတဲ့ စိတ်မနှံ့တဲ့ လူတွေ.. Attention seekers တွေကို အဖက်လုပ်ပြီး ပြန်ပြောမနေကြပါနဲ့)) လို့ အစ်မက ပြောထားလို့ အဲဒီ ရုရှားက ခွေးရူး mg ကို မပြောဘဲ နေနေတာဗျ.. ရုရှားက စစ်ခွေး mg က အစကတော့ ရိုးရိုးစစ်ခွေးဘဲဗျ.. အစ်မကို ရိုးရိုးစစ်ခွေးလို သာမန်လောက်ဘဲ အစဉ်အလာမပျက် ဟောင်တယ်ဆိုရုံ ဟောင်လာတာပါ.. ဒါပေမယ့် အစ်မ တင်ပြထားတဲ့ သမိုင်းမှန် ပို့စ် (7 July, 1962 မှာ ဘာဖြစ်ခဲ့လဲ) ကို စာဖတ်သူတွေ အများကြီး လာဖတ်တာကို မြင်ရကတဲက အဲဒီ စစ်ခွေး mg က သွေးလန့်ပြီး ခွေးရူး လုံးလုံး ဖြစ်သွားတာဗျ.. စစ်ခွေး mg က အဲဒီလို ခွေးရူး လုံးလုံး ဖြစ်သွားပြီးကတဲက အစ်မကို နေ့ရောညပါ လာဟောင်နေတာဗျ.. လွန်ခဲ့တဲ့ ၃ ရက်လောက်က အစ်မက comment moderation လုပ်ထားလို့ အဲဒီ ခွေးရူး mg ရဲ့ ဆဲတဲ့ comments တွေ.. အစ်မကို စော်ကားတဲ့ comments တွေ.. ပေါက်ကရ comments တွေကို ၂ ရက်လောက် မမြင်ရလို့ အစ်မဘလော့လာတဲ့ စာဖတ်သူတွေ အေးအေးချမ်းချမ်း စာဖတ်လို့ ရနေတာဗျ.. အစ်မဘလော့ အေးချမ်းနေတာ ၂ ရက်တောင် မခံဘူး.. အစ်မက comment moderation လုပ်ထားတာကို ပြန်ဖြုတ်လိုက်တာနဲ့ အဲဒီ ခွေးရူး mg က (ဟာဂျီအဗ္ဗဒူလ်မိုဟာမက်ဒီနစ်ဘိုင်) ဆိုတဲ့ နာမည်ကို သုံးပြီး အစ်မကို ဆဲထားတာတွေရော.. အဲဒီ ခွေးရူး mg က ဦးသူတော်.. Anonymous နာမည်တွေနဲ့ ပေါက်တတ်ကရ ရေးထားတာတွေရော ပွစာကျဲနေပြန်ပြီဗျ.. အဲဒီ ရုရှားက ခွေးရူး mg က (ဟာဂျီအဗ္ဗဒူလ်မိုဟာမက်ဒီနစ်ဘိုင်) ဆိုတဲ့ နာမည်ကို သုံးပြီး အစ်မကို ဆဲထားတာ ဒီပို့စ် တခုထဲမှာ မဟုတ်ဘူး.. အစ်မ.. ( ၁၉၈၈ က ၄င်းကိုယ်တိုင် ကျူးလွန်ခဲ့သော စစ်ရာဇ၀တ်မှုများကို စစ်ထောက်လှမ်းရေးဟောင်း တဦးက ၀န်ခံလိုက်ခြင်း ) .. ( (၆၃)နှစ်မြောက် အာဇာနည်နေ့ အမှတ်တရအဖြစ် - ဗိုလ်ချုပ်မိန့်ခွန်း ) .. ( ဥသြမဆွဲသော အာဇာနည်နေ့ကို စတင်တဲ့နှစ် ) .. ( အလေးပြုပါတယ် ) .. ( ၁၉ ဇူလိုင် မမေ့နိုင် ) ပို့စ်တွေမှာလဲ ခွေးရူး mg က ဝင်ဆဲထားတဲ့ comments တွေက မြင်မကောင်းရှုမကောင်း ပွထနေပြန်ပြီဗျ.. comment moderation ပြန်လုပ်ထားလိုက်ပါ..အစ်မ.. comments တွေကို ချက်ချင်း မဖတ်ရလို့ အရေးမကြီးဘူး.. ဒီ ရုရှားက ခွေးရူး mg က နေရာတကာမှာ မစင် ဝင်စွန့်နေတော့ အစ်မရဲ့ စာဖတ်သူတွေကို အားနာဖို့ ကောင်းနေလို့ အခုလို အကြံပေးရတာပါ..အစ်မ..
ပြည်သူ့ဘလော့ဂါ မငယ်နိုင်ကို မဆီမဆိုင် အသားလွတ် တိုက်ခိုက်ထားတဲ့ ဆောင်းပါးတပုဒ် says:
November 11, 2011 at 1:15 PM Reply
စစ်အုပ်စုကို ပြတ်ပြတ်သားသား ဆန့်ကျင်တဲ့ ဒီမိုကရေစီဘက်တော်သား ဘလော့ဂါ မငယ်နိုင်ကို ရုရှက စစ်ခွေးတကောင်က ဒေါက်တာလှိုင်မြင့် နာမည်ကို အလွဲသုံးစား လုပ်ပြီး တိုက်ခိုက်ထားတာကို "ပြည်သူ့ဘလော့ဂါ မငယ်နိုင်ကို မဆီမဆိုင် အသားလွတ်
တိုက်ခိုက်ထားတဲ့ ဆောင်းပါးတပုဒ်" ခေါင်းစဉ်ကို နှိပ်ပြီး သွားဖတ်နိုင်ပါတယ်။
Nge Naing ဘလော့မှာ တင်ထားတဲ့ "ဗေဒါလမ်း နှင့် ငယ်နိုင်လမ်း" ကို Myanmar Express ဘလော့ကနေ လာဖတ်တဲ့ စာဖတ်သူတွေ မနေ့ (၁၀-၁၁-၁၁ ရက်) နဲ့ ဒီနေ့ (၁၁-၁၁-၁၁ ရက်) မှာ အရမ်း များနေတာရဲ့ အကြောင်းရင်းက ဒီလိုပါ။
ဒေါက်တာလှိုင်မြင့် (အတု) (Myanmar Express ဘလော့ ဝိုင်းတော်သား ရုရှက စစ်ခွေးတကောင်) က ပြည်သူ့ဘလော့ဂါ မငယ်နိုင်ကို တိုက်ခိုက်ထားတဲ့ ဆောင်းပါး တပုဒ်ကြောင့်ပါ။
(( အသက်ငယ်တဲ့လူတွေက လုပ်လို့၊ အသက်ကြီးတွေက တားရကောင်းမှန်းလည်း မသိဘူး။ တစ်ခါတုန်းကလည်း http://nge-naing.blogspot.com/2011/07/blog-post_14.html မှာ အသက် ၄၀ ကျော် အမျိုးသမီးကြီးလုပ်နေပြီး ဆရာဇော်ဂျီရဲ့ ဗေဒါလမ်း ကဗျာကို သူ့နာမည် တပ်ပြီး ဗေဒါလမ်း လို့ပေးထားတာတွေ့တုန်းက ဝင်ပြောမိသေးတယ်။ ))
ဆိုပြီး Myanmar Express ဘလော့ ဝိုင်းတော်သား ရုရှက စစ်ခွေးက ဒေါက်တာလှိုင်မြင့် နာမည်ကို အလွဲသုံးစား လုပ်ပြီး မငယ်နိုင်ကို တိုက်ခိုက်ထားတာပါ။
အကြောင်းမသိသေးတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံက စာဖတ်သူ အသစ်တွေအတွက် ပြောရမယ် ဆိုရင် Myanmar Express ဘလော့ ဆိုတာက အန်တီစု အပါအဝင် ဒီမိုကရေစီ အတွက် တိုက်ပွဲဝင်နေသူ ပြည်သူတွေနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အရည်မရ အဖတ်မရ လုပ်ကြံဇာတ်လမ်း ကလိမ်ကကျစ် သတင်း မျိုးစုံကို ရေးနေတဲ့ ဘလော့ပါ။
စစ်အုပ်စု အလိုကျ ဖော်လံဖားပြီး ရေးစားနေတဲ့ "ဒေါ်လာစား" အမည်ခံ ကြေးစား အရိုးအရင်းစား စစ်ခွေးတကောင်ရဲ့ ဘလော့ပါ။
Myanmar Express ဘလော့ဟာ ဂျာနယ်လစ် ကျင့်ဝတ်ကို လိုက်နာဖို့ ဝေးလို့ ဘလော့ဂါ ကျင့်ဝတ်ကိုတောင် မလိုက်နာတဲ့ ဘလော့ပါ။
အဲဒါတွေ ထားလိုက်ဦး၊ အနိမ့်ဆုံးအဆင့် ဖြစ်တဲ့ လူ့ကျင့်ဝတ်ကိုတောင် လိုက်နာရကောင်းမှန်း မသိတဲ့ သိက္ခာ၊ အဆင့်အတန်း လုံးဝ မရှိတဲ့ အောက်တန်းစားဘလော့ပါ။
November 11, 2011 at 8:38 PM Reply
သတင်းပေးတဲ့ စာဖတ်သူ ကျေးဇူးပါ။ အစ်မလည်း ဘလော့ဂ်ကို ဘယ်သူလာထားတယ်ဆိုတာ စာဖတ်သူရဲ့ မှတ်ချက်ကို အီးမေးလ်ထဲမှာ တွေ့မှ ပြန်ကြည့်ဖြစ်တယ်။ ဒီနှစ်ရက်အတွင်း ဒေါ်လာစားဆီက လာထားတာသက်သက်ပဲ အများကြီး လူတထောင်ကျော်တယ် ၀င်ထားတာ။ ဒေါ်လာစား လုပ်နေတာ ဘာရည်ရွယ်ချက်နဲ့ပဲ လုပ်လုပ် သူလုပ်တာ အစ်မဘလော့ဂ်မှာ ပို့စ်အသစ် မတင်လို့ လူလာကျဲနေတဲ့အချိန်မှာ လူလာအောင် လုပ်ပေးရာ ရောက်နေတာတော့ အမှန်ပဲ။ ကြော်ငြာပေးတာက အကြောင်းမဟုတ်ဘူး သူ့ပို့စ်ကို ဒေါက်တာလှိုင်မြင့်နာမည် သုံးပြီး ရေးထားသလို အစ်မဆီမှာလည်း ယောက်ျားတန်မဲ့ လျှာအခွတရာနဲ့ အစ်မနာမည်သုံးပြီး ယောက်ျားနဲ့ အဆင်မပြေလို့ ပို့စ်အသစ်မတင်နိုင်သေးဘူးလို့ Nge Naing နာမည်နဲ့ အစ်မ C-Box ထဲမှာ ရေးထားခဲ့လို့ နှစ်ကြိမ်တောင် ဖျက်လိုက်ရတယ်။ အဲဒါ သူရေးတယ်ဆိုတာ စာဖတ်သူရဲ့ မှတ်ချက်ကို အခုတွေ့မှ သဘောပေါက်တော့တယ်။ အလုပ်ရှုပ်ခံပြီး လိုက်ဖျက်မနေတော့ဘူး C-Box ကို ခဏပိတ်ထားလိုက်ရတယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် သူကြော်ငြာပေးလို့ အစ်မဘလော့ဂ်ကို ရောက်လာတဲ့သူတွေက ဘလော့ဂ်မှာ ပို့စ်တခုခုကို ဖတ်ဖြစ်ပြီး မှတ်သားစရာလေးတခုခု ရသွားမှာ သေချာပါတယ်။ ဘာမှ လိုက်မဖတ်ဘဲ သူညွန်းထားတဲ့ ဒီပို့စ်ကိုပဲ ဖတ်ပြီး ပြန်ကြတဲ့သူတွေလည်း သူဘယ်လောက် ကောက်ကျစ်ပြီး Nge Naing ကို ဘယ်တုန်းကတောင် ပုတ်ခတ်စော်ကားနေတယ်ဆိုတာ သိသွားမှာပဲ။ သူပြောတဲ့စကားကိုလည်း ဘယ်သူမှ ယုံမှာမဟုတ်ပါဘူး။ ယုံတဲ့သူကလည်း သူ့လို သူများအတင်းပြောမှ ထမင်းစားရတဲ့ အစားထဲကပဲ ဖြစ်မှာမို့ ဂရုစိုက်စရာ မလိုပါဘူး ထားလိုက်ပါ။
စာလာဖတ်သူတွေကိုလည်း ဘယ်ကပဲ ရောက်လာရောက်လာ ကျွန်မ မအားလို့ ပို့စ်အသစ်မတင်နိုင်သေးတဲ့အချိန်မှာ C-Box ဘေးနားမှာ ကပ်လျှက်ရှိတဲ့ Label ထဲကနေပြီး ကဏ္ဍအလိုက်ကြိုက်ရာ ပို့စ်တခုခုကို ရွေးဖတ်ပြီးမှ ပြန်ကြဖို့ တိုက်တွန်းပါတယ်။ လာလည်သူအားလုံးကို ကြိုဆိုပါတယ်။
သတင်းပေးတဲ့ စာဖတ်သူကို အထူးပဲ ကျေးဇူးတင်လျက်